Dopamine နှင့်ဆုလာဘ် - အနှစ် ၃၀ ကြာသည့် anhedonia အယူအဆ။ (30) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
Dopamine နှင့်ဆုလာဘ်: ပေါ်တွင် anhedonia အယူအဆ 30 နှစ်ပေါင်း။ (2008)
Neurotox Res ။ 2008 အောက်တိုဘာလ; 14(2-3): 169-183 ။
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Neurotox Res
အဆိုပါ anhedonia အယူအဆ - ဦးနှောက် dopamine အပြုသဘောဆုလာဘ်နှင့်အတူဆက်စပ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အပျော်အပါးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်း - dopamine အစားအစာနှင့်ရေနှင့်ဆက်စပ်ရည်ရွယ်ချက်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုအတွက်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍသောကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားမှစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်များ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သည် , ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်များနှင့် psychomotor လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် opiate ဆုလာဘ်။ အဆိုပါယူဆချက် neuroleptics, anhedonia (schizophrenia) ပတျသကျတဲ့အခွအေနေကုသရန်ဖို့အသုံးပြုမူးယစ်ဆေးဝါး, ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်အပျြောအပါးနှင့်အတူပေါင်းသင်းသောအပြုသဘောအားကောင်း attenuated သောသရုပ်ဝိရောဓိအာရုံကိုခေါ်။ အဆိုပါယူဆချက်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းထောက်ပြသူကိုစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, အဘို့ကိုသာအတိုချုပ်အကျိုးစီးပွားကျင်းပ ထက်မြက်သော schizophrenia များ၏ကုသမှုသော်လည်း neuroleptics ၏လုပ်ရပ်များမှ neuroadaptations ကနေဖြစ်ပေါ်ပုံ ရှည်ကြာသော neuroleptic အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် neuroleptics မဟုတ်ဘဲ anhedonia ပါဝင်သည်သောအပျက်သဘောလက္ခဏာတွေထက်သက်သာစေနိုင်ကြောင်းကြောင်း schizophrenia များ၏အပြုသဘောဆောင်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်ဤအကြောင်းပြချက်အဘို့, အယူအဆဟာစိတ်ရောဂါစာပေအတွက်အနည်းငယ်မျှသာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ schizophrenia များ၏နားလည်မှု၎င်း၏ကန့်သတ် heuristic တန်ဖိုးကိုနေသော်လည်းသို့သော် anhedonia အယူအဆအားဖြည့်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စွဲလမ်း၏ဇီဝသီအိုရီအပေါ်အဓိကသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဦးနှောက် dopamine တုံ့ပြန်မှုအလေ့အထများ, အေးစက်ဦးစားပေးများနှင့်လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏ဆယ်လူလာမော်ဒယ်များအတွက် Synaptic plasticity ၏အားဖြည့်တစ်ဦးသည်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ dopamine အားဖြည့်အတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှဆောင်ရွက်သောအယူအဆစွဲအများစု neuroadaptation သီအိုရီငှါ၎င်း, Conditions အားဖြည့်ခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်း၏လက်ရှိသီအိုရီမှစွဲလမ်း၏ psychomotor လှုံ့ဆော်သီအိုရီမှအခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်တကျနားလည်သဘောပေါက်သောကြောင့်လည်းမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများမကြာသေးမီသီအိုရီမှအခြေခံဖြစ်ပါတယ်။
keywords: Dopamine, ဆုကြေး, စစ်ကူ, Motivation, Anhedondia
neuroleptic လုပ်ဆောင်ချက်၏ anhedonia အယူအဆ (ပညာရှိ 1982) (စတင်ဖွဲ့စည်းထံမှခဲ့သည်ပညာရှိသောသူ et al ။, 1978ကျယ်ပြန့်ယူဆချက်), တစ်ဦးစောဒနာ, ဆုလာဘ်၏ dopamine ယူဆချက် (ပညာရှိ 1978) သို့မဟုတ်အားဖြည့် (Fibiger, 1978) ။ အဆိုပါ dopamine ယူဆချက်တစ်ခုအစောပိုင်းက catecholaminergic သီအိုရီ, ဆုလာဘ်၏ noradrenergic သီအိုရီ (ထံမှသွေဖီသူတို့ကိုယ်သူတို့ခဲ့ကြသည်Stein, 1968) ။ ဆုလာဘ်၏ dopamine အယူအဆ, အားဖြည့်များ၏ dopamine အယူအဆနှင့် neuroleptic လုပ်ဆောင်ချက်၏ anhedonia အယူအဆ: ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်နောက်ခံ, ကနဦးတုံ့ပြန်ချက်ကိုကို၎င်း, အချင်းချင်း-related dopamine ယူဆချက်လက်ရှိအနေအထားကိုပုံကြမ်းဆွဲဖော်ပြခဲ့။
တိရိစ္ဆာန်အပြုအမူဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်ကထိန်းချုပ်ထားကြောင်းအဆိုပါအယူအဆ (ပလေတိုကသူ့အစ်ကိုကစွပ်စွဲ) ဆက်ဆက်သမိုင်းတွင်ထက်အသက်ကြီးပါတယ်။ ဒီ function ကို၏တွေ့ရှိချက်များကဇီဝဆိုတဲ့အချက်ကိုအခိုင်အမာကျောက်ချရပ်နားခဲ့သည်တစ်ခုသတ်မှတ်ဦးနှောက်ယန္တရား subserves သောအယူအဆ ကြားရှိနှင့် Milner (1954) ကြွက်ဟာ forebrain အချို့ရှိသော်လည်းအခြားဒေသများ၏လျှပ်စစ်ဆွဘို့အလုပ်မလုပ်လိမ့်မည်။ ဤသည်အားဖြင့် postulation မှဦးဆောင် ကြားရှိ (1956) အဆိုပါနှစ် ဦး နှစ်ဖက် hypothalamus နှင့်ဆက်စပ် ဦး နှောက်ဒေသများရှိ "အပျော်အပါးစင်တာများ" ၏။ အားဖြင့် ဦး နှောက်ဆွလေ့လာမှုများ sem-Jacobsen (1959) နှင့် Heath (1963) (လူသားမြားသညျထိုကဲ့သို့သောဆွဘို့အလုပ်မလုပ်မယ်လို့အတည်ပြုခဲ့သည်ကြောင့်ပျြောမှေ့စရှာတွေ့Heath, 1972) ။ ကြားရှိ (ကြားရှိနှင့်ကြားရှိ, 1963) ဆုရသည့်နေရာများအတွက်ကြွက်၏ ဦး နှောက်ကိုမြေပုံဆွဲပြီး၊ သူသည်ခေါင်းစဉ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ၊ကြားရှိ, 1956) (သူကအထီးကျန်စင်တာများနှင့် ပတ်သက်. အကြောင်းကိုအပြန်အလှန် circuit ကိုဒြပ်စင်အဖြစ်ဤမျှလောက်မရစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားမျိုးဆက်တစ်ဆက်၏စိတ်ထဲတွင်ဖမ်းယူခဲ့သည်ကြားရှိ, 1956; 1959; ကြားရှိနှင့်ကြားရှိ, 1965). ကြားရှိ (1956) ယင်းတို့ကိုအထူးအခြေခံဆားကစ်များဟုယူဆပြီး“ အခြေခံ drives များ - ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း၊ လိင်၊
ဦးနှောက်အတွက်ဆုလာဘ်-related အချက်ပြမှုများကိုသယ်ဆောင်စေခြင်းငှါ, အဘယျသို့ neurotransmitters ၏ပထမဦးဆုံးအရိပ်အမြွက် pharmacological လေ့လာမှုများကနေရောက်လာတယ်။ ကြားရှိနှင့် Travis (1960) နှင့် Stein (1962) အဆိုပါလှုံ့ဆော်စိတ်ကြွဆေးက potentiated နေစဉ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး reserpine နှင့် chlorpromazine သိသိသာသာ, intracranial Self-stimulation attenuated ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Imipramine (စိတ်ကြွဆေး၏သက်ရောက်မှု potentiatedStein, 1962) ။ Reserpine ဦးနှောက် noradrenaline ပျက်ဆီးဖို့လူသိများခဲ့သည် chlorpromazine noradrenergic receptors ပိတ်ဆို့ဖို့လူသိများခဲ့သည်, စိတ်ကြွဆေးတစ် noradrenaline လွှတ်ပေးရေးဖြစ်လူသိများခဲ့ပါတယ်နှင့် imipramine noradrenergic reuptake ပိတ်ဆို့ဖို့လူသိများခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့်ကဤအချက်အလက်များ၏အခြေခံနှင့် noradrenergic ဆဲလ်များနှင့်အမျှင်စပ်လျဉ်းဆုလာဘ်က်ဘ်ဆိုက်များ၏တည်နေရာပေါ်, Stein (1968) ကြောင်းဆုလာဘ် function ကို (စိတ်ဝင်စားစရာ Stein ကနဦးကဤစနစ်၏အဓိကဇာစ်မြစ်အဖြစ်မဟုတ်ဘဲ noradrenergic အာရုံခံထက် dopaminergic ပါဝင်ထွက်လှည့်သော A10 ဆဲလ်အုပ်စုဖော်ထုတ်) ကို brainstem ထဲမှတစ်ဦး noradrenergic လမ်းကြောင်းကကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်အဆိုပြုထား။ မိမိအယူဆချက်, CD ကိုလိုက်ရှာ ပညာရှိ Stein (1969; 1970; Self-stimulation ဖျက်သိမ်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးနှုန်း-တိုးမြှင့်အရေးယူဖယ်ရှားပစ် -) dopamine-β-hydroxylase ၏တားစီး norepinephrine မှ dopamine ပြောင်းပေးသောအင်ဇိုင်းတွေ့ရှိခဲ့ ၏ intraventricular အုပ်ချုပ်ရေး l-norepinephrine Self-stimulation ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းနှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် dopamine များ၏စွမ်းရည်ကိုပြန်၏။
ဆုလာဘ်၏ noradrenergic သီအိုရီ၏ကနဦးရေးဆွဲရေး၏ထိုအချိန်တွင် dopamine တစ် noradrenergic ရှေ့ပြေးအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ transmitter ကိုအဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။ ဤအချိန်အကြောင်းကိုမှာ, သို့သော်, Carlsson et al ။ (1958) dopamine ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ neurotransmitter ဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုသည်။ noradrenaline နှင့် dopamine အာရုံကြောစနစ် (မှာရှိတဲ့ကွဲပြားခြားနားသောဖြန့်ဝေရှိသည်သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုCarlsson, 1959; Carlsson နှင့် Hillarp, ​​1962) ဒီယူဆချက်ကိုအတည်ပြုအားထင်ရှားလျက်, midbrain ၏ dopamine ပါဝင်သောဆဲလ်၏ဒေသတွင်း၌ဆုလာဘ်က်ဘ်ဆိုက်များ forebrain circuitry အတွက်နှစ်ခု catecholamines က transmitter အကြံပြု Crow အဘိဓါန်နှင့်အခြားသူများကိုဦးဆောင် - noradrenaline နှင့် dopamine - ငှါ အသီးအသီး (ဆုလာဘ် function ကို subserveCrow အဘိဓါန်, 1972; ကျီးကန်း et al ။, 1972; ဖိလစ်နှင့် Fibiger, 1973; ဂျာမန်နှင့် Bowden, 1974).
ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ခန္ဓာဗေဒ: နောက်ဆုံးမှာဦးနှောက်ဆွနဲ့စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်အတွက် norepinephrine အဘို့ကအဓိကအခန်းကဏ္ဍမှထွက်အုပ်ချုပ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားနှစ်ခုအရင်းအမြစ်များမှစုပြုံလာတယ်။ အဆိုပါ pharmacological ပြဿနာရွေးချယ် noradrenergic blockers သို့မဟုတ်လျော့ကျဆုလာဘ် function ကိုကိုယ်နှိုက်ကနှောင့်အယှက်သို့မဟုတ်မျှသာတိရစ္ဆာန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်စွမ်းရည်ချို့ယွင်းခြင်းရှိမရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ ဥပမာ, roll (1970) noradrenergic ပေါင်းစပ်တားစီးအိပ်ချင်တိရိစ္ဆာန်များအောင်နေဖြင့် Self-stimulation နှောင့်အယှက်ကြောင်းအစီရင်ခံ; တိရစ္ဆာန်နောက်တဖန်အိပ်ပျော်ခြင်းသို့သက်တမ်းလည်းကုန်ဆုံးသွားပြီသည်အထိသူတို့ကိုနှိုး (အချိန်များအတွက်အပြုအမူပွနျလညျထူထောငျroll, 1970) ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆုချမှမဟုတ်ဘဲ sensitivity ကိုဆုံးရှုံးထက်နစ်နာမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များနည်းလမ်း intracranial Self-stimulation နှောင့်အယှက် Noradrenergic အဲဒီ receptor ရန် (Fouriezos et al ။, 1978; Franklin, 1978) ။ ဒါ့အပြင် noradrenergic ရန် (စိတ်ကြွဆေး၏သွေးကြောသွင်း (IV) Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှောင့်အယှက်ပျက်ကွက်Yokel နှင့်ပညာရှိ, 1975; 1976; Risner နှင့်ဂျုံးစ်, 1976) သို့မဟုတ်ကင်း (က de ကျေးများနှင့်ပညာရှိ, 1977; Risner နှင့်ဂျုံးစ်, 1980) ။ ထို့ပြင်အဆိုပါ dorsal ဆော့ဝဲအစုအဝေး၏ noradrenergic အမျှင်များကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဆော့ဝဲအစုအဝေးအစပြုရှိရာ locus coeruleus အနီး, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက်လျှပ်လှုံ့ဆော်ဖို့နှင့်အတူ Self-stimulation နှောင့်အယှက်ရန်ပျက်ကွက်, အရာကနေတဆင့်အစုအဝေးကိုစီမံကိန်းများကို (Corbett et al ။, 1977) ။ နောက်ဆုံးတွင် locus coeruleus ၏ဒေသနှင့်ရှိအစပြုသော dorsal noradrenergic ဆော့ဝဲအစုအဝေးအမျှင်များ၏လမ်းကြောင်း၏သတိထားမြေပုံကဤဒေသများတွင်အပြုသဘောဆုလာဘ်က်ဘ်ဆိုက်များ histochemically အတည်ပြုခဲ့သည် noradrenergic ဒြပ်စင် (များ၏တိကျသောတည်နေရာကိုက်ညီတဲ့မထင်ရှားCorbett နှင့်ပညာရှိ, 1979).
အခြားတစ်ဖက်တွင်, dopamine receptors များအတွက်ရွေးချယ်ရန်မရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်အဖြစ်သက်သေအထောက်အထားကြောင်း dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့စုပြုံစတင်မဟုတ်ဘဲစွမ်းဆောင်ရည်စွမ်းရည်တစ်ခုချို့ယွင်းထက်ဆုလာဘ်တစ်ခုတန်ဖိုးဆိုလိုကြောင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့ Self-stimulation နှောင့်အယှက်။ neuroleptics - - အဓိကအားဖြင့်မော်တာချွတ်ယွင်းခဲ့ (dopamine ရန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအစောပိုင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိခဲ့သည်Fibiger et al ။, 1976) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်ထက် neuroleptics အားဖြင့်နှောင့်အယှက်ကြောင့်ဒီဧရိယာထဲမှာကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဒီအနက်မှဘာသာရပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ norepinephrine, epinephrine, dopamine နှင့် serotonin - ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာကြွက်စိတ်ကြွဆေး၏ IV ထိုး, လေးခု monoamine neurotransmitters ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏ဖြန့်ချိခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေတဲ့မူးယစ်ဆေးများအတွက်လီဗာ-စာနယ်ဇင်းမှလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူး IV စိတ်ကြွဆေးမှတိရိစ္ဆာန်များကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့် adrenergic သို့မဟုတ် dopaminergic receptors များအတွက်ရွေးချယ်ရန်နှင့်အတူစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့မြင့်မားသောဆေးများနဲ့ကုသတိရစ္ဆာန်များ (ပထမတစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွက်တုံ့ပြန်တိုးမြှင့်ပေမယ့်အဲဒီနောက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းတုံ့ပြန်စဉ်ရွေးချယ် dopamine ရန်၏အနိမ့်များနှင့်အလယ်အလတ်ဆေးများနဲ့ကုသတိရစ္ဆာန်များရိုးရိုး, သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန် (ပုံမှန်စိတ်ကြွဆေးဆေးများထက်နိမ့်နှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးတိရိစ္ဆာန်များလုပ်ပေးကဲ့သို့) တိုးမြှင့် စိတ်ကြွဆေးအဘို့အစားထိုးဆားနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီး) (Yokel နှင့်ပညာရှိ, 1975; 1976) ။ အလားတူသက်ရောက်မှု (ကိုကင်းဘို့လီဗာ-နှိပ်ကြွက်များတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြက de ကျေးများနှင့်ပညာရှိ, 1977) ။ အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရွေးချယ် noradrenergic ရန်နှင့်မြင်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဒီဆေးတွေကို (session ရဲ့အလွန်က start ကနေတုံ့ပြန်လျော့နည်းသွားနှင့်တိရိစ္ဆာန်များရရှိခဲ့သည်အဖြစ်ထပ်မံလျှောက်လျော့နည်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမပြုခဲ့နှင့်ဤအခြေအနေမူးယစ်ဆေးကြုံတွေ့Yokel နှင့်ပညာရှိ, 1975; 1976; က de ကျေးများနှင့်ပညာရှိ, 1977) ။ မူးယစ်ဆေးအကျိုးသည်တုံ့ပြန်အတွက်တိုးရှင်းလင်းစွာစွမ်းဆောင်ရည်ချို့ယွင်းမှစွပ်စွဲလို့မရပါ။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ပေးထားသောဆေးထိုးထံမှဆုလာဘ်များ၏ကြာချိန် dopaminergic လျှော့ချခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, စိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းများ၏အကြိုးထိရောက်မှုတစ်လျှော့ချရေးထင်ဟပ်အဖြစ်အနက်, ဒါပေမယ့်မရ noradrenergic, ရန်ခဲ့ကြသည်။
psychomotor လှုံ့ဆော်ဆုလာဘ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pharmacological လေ့လာမှုများနှင့်အတူအပြိုင်တှငျကြှနျုပျတို့ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်၏ pharmacological လေ့လာမှုများထွက်သယ်ဆောင်။ ဤတွင်သို့သော်မဟုတ်ဘဲတိုးမြှင့်လီဗာ-နှိပ်ခြင်းထက်လျှော့ချဆုလာဘ်-လျှော့ချရေးကဲ့သို့ dopamine ရန်, ။ neuroleptics ဦးနှောက်ဆွဘို့အတုံ့ပြန်လျော့ခြင်းနှင့် psychomotor စိတ်ကြွဆေးအဘို့တုံ့ပြန်တိုးမြှင့်သောအကြောင်းပြချက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ကြပြီးယခု (နားလည်သဘောပေါက်နေကြတယ်Lepore နှင့် Franklin, 1992), ဒါပေမယ့်အချိန်ကတုံ့ပြန် dopaminergic ချို့ယွင်း၏ parkinsonian ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အကြံပြုခဲ့ပါတယ်လျော့နည်းသွားFibiger et al ။, 1976) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များ၏ timecourse ဒီရှင်းပြချက်အထဲကအုပ်ချုပ်ဖို့ထင်ရှား။ , ကျနော်တို့ dopamine pimozide ရန်သို့မဟုတ် butaclamol နှင့်အတူ Pre-ကုသခဲ့ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားတိရိစ္ဆာန်များအတွက်တုံ့ပြန်၏အချိန်-သင်တန်းခြေရာခံ။ ကျနော်တို့တိရိစ္ဆာန်များ unexpectectly လျှော့ချ၏အခြေအနေများအောက်တွင်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ပါဘူးအဖြစ်, သူတို့ကကြိုတင်အားဖြည့်သမိုင်းကြောင်းကနေပုံမှန်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ထားကြလိမ့်မည်သည့်အခါတိရစ္ဆာန်, အသီးအသီး session ရဲ့ကနဦးမိနစ်အတွင်းပုံမှန်အားဖြင့်တုန့်ပြန်, ဒါပေမဲ့သူတို့နှေးကွေးသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်စဲခြင်း, neuroleptic ထိုးပေါ် မူတည်. တွေ့ရှိခဲ့ ဆုလာဘ် (Fouriezos နှင့်ပညာရှိ, 1976; Fouriezos et al ။, 1978) ။ အဆိုပါ noradrenergic ရန် phenoxybenzamine နှင့်အတူ pretreated တိရစ္ဆာန်များဆန့်ကျင်ဘက်ထဲမှာ, session ရဲ့အလွန်က start ကနေစိတ်ဓာတ်လီဗာ-နှိပ်ပြသူတို့အကြိုးဆွရရှိခဲ့ပြီးနှင့်ကြုံတွေ့အဖြစ်သူတို့နောက်ထပ်နှေးကွေးခဲ့ပါဘူး။ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ phenoxybenzamine-ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆင်းရဲသားတို့ကိုခဲ့ပေမယ့်တိရစ္ဆာန်များအနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာအကျိုးကိုနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့ကြောင့်ပိုမိုဆိုးဝါးလာခဲ့ပါဘူး။
ဒါက dopaminergic သော်လည်းမတုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်မှုရေရှည်တည်တံ့ဖို့ဆုလာဘ်များ၏စွမ်းရည်ချို့ယွင်း noradrenergic ရန်တစ် discrete-ရုံးတင်စစ်ဆေးလေယာဉ်ပြေးလမ်းစမ်းသပ်မှုများတွင်စမ်းသပ်ပြီးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ဤတွင်, တိရစ္ဆာန်တစ်ဦးက start box ထဲကသူတို့လီဗာ-စာနယ်ဇင်းနိုင်ရှိရာ, တစ်နေ့လျှင် 10 စမ်းသပ်မှုတွေ၏တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်, ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်၏ 15 ဝက်ဒုတိယရထားများအတွက်ရည်မှန်းချက် box ကိုတစ်နှစ်မီတာ alleyway သို့ပွေးလေ၏။ သင်တန်း၏ရက်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များ neuroleptic pretreatment ပြီးနောက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ neuroleptic အခြေအနေ 10 စမ်းသပ်မှုတွေ၏သင်တန်းကျော်, တိရစ္ဆာန်စတင် box ကိုစွန့်ခွာရပ်တန့်တံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်ချက်ချင်းသောအခါ, ရည်မှန်းချက် box ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်တိုက်ရိုက် run နေရပ်တန့်လျက်, ဆွဘို့အလီဗာ-နှိပ်တော့ဘူး။ အရေးကြီးတာကသို့သော်သူတွေရဲ့စားသောက်တုံ့ပြန်မှု - ထိုဆာပတုံ့ပြန်မှုမပြုမီယိုယွင်းဆိုးရွား - - ထို alleyway ဆိုးရွားစတင် box ကိုစွန့်ခွာခြင်းနှင့် running သူတို့ရည်မှန်းချက် box ကိုတုန့်ပြန်ရောက်ရှိခဲ့သည်တစ်ချိန်ကဆွဝင်ငွေ။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များကိုပထမဦးဆုံး 8 စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့ပုံမှန်အောင်းနေချိန်နှင့်အတူစတင် box ကို left, သာပထမဦးဆုံး7စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့ပုံမှန်အားပွေးနှင့် neuroleptic စမ်းသပ် session ကိုသာပထမဦးဆုံး6စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့ပုံမှန်နှုန်းထားများမှာလီဗာ-ဖိ။ အရှင်တိရိစ္ဆာန်များအကျိုးကိုအတွက်စိတ်ပျက်မိကြောင်းလက္ခဏာပြသ - ထိုလျော့နည်းသွားပန်းတိုင် box ထဲမှာတုံ့ပြန်သဖြင့်ညွှန်ပြ - သူတို့တုံ့ပြန်ချဉ်းကပ်မှုဖွငျ့ဖျောပွထားလှုံ့ဆျောမှုမဆိုမရှိခြင်းပြသမီ။
ဤရွေ့ကား Self-stimulation တွေ့ရှိချက်ကျွန်ုပ်တို့၏ neuroleptic ဆေးများရိုးရိုးမော်တာလိုငွေပြမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူနောက်တဖန်သဟဇာတရှိကြ၏။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များအစည်းအဝေးများရဲ့အစမှာပုံမှန်စွမ်းရည်ပြသ, သူတို့ရည်မှန်းချက် box ထဲမှာအကျိုးကိုနှင့်အတူအရိပ်လက္ခဏာစိတ်ပျက်မိကြောင်းပြသပြီးနောက်သည်အထိအထွတ်အထိပ်မြန်နှုန်းမှာ alleyway run ဖို့ဆက်ပြောသည်။ ထို့အပြင်လီဗာ-နှိပ်စမ်းသပ်ချက်အတွက် neuroleptic-ကုသတိရိစ္ဆာန်များတခါတရံသူတို့ရဲ့ Open-ထိပ်ဆုံးစမ်းသပ်အခန်းများထဲကခုန်များနှင့်အထပ်သားနံရံအစွန်းပေါ်မှာမရေရာသောဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်း; အရှင်တိရိစ္ဆာန်များနေဆဲ (ကောင်းသောမော်တာခွန်အားနှင့်ညှိနှိုင်းခဲ့Fouriezos, 1985) ။ မိနစ်အနည်းငယ်သောကွောငျ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ဤမျှမလုပ်ခဲ့ဘူးပြီးနောက်တုံ့ပြန်စဲကြောင်းထိုမှတပါး, neuroleptic-ကုသတိရိစ္ဆာန်များ; သူတို့ re-အစပျိုးပုံမှန်တုံ့ပြန်တင်ပြသည့်အခါဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှု (Fouriezos နှင့်ပညာရှိ, 1976; Franklin နှင့် McCoy, 1979) ။ : ထို့အပွငျတစျခု, neuroleptic-ကုသကြွက်ဦးနှောက်ဆွအကျိုးသည်တုံ့ပြန်မှုသင်ယူ extinguishing ပြီးနောက်တူညီတဲ့ဆုလာဘ်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာယခင်ကလေ့လာသင်ယူ, ဆာပတုံ့ပြန်မှု (သူတို့ထို့နောက်ဒုတိယတုံ့ပြန်မှုတိုးတက်သောသုဉ်းမှတဆင့်သွားပါ, သာမန်တုံ့ပြန်မှုခွန်အားနှင့်, အစပျိုးပါလိမ့်မယ် Gallistel et al ။, 1982) ။ စွမ်းဆောင်ရည်တောင်းဆိုချက်တွေအတွက်အပြောင်းအလဲများကို (ပြုပါအဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ neuroleptics ၏အလယ်အလတ်ဆုလာဘ်-attenuating ဆေးများတစ်လျှော့ချတုံ့ပြန်မှုမျက်နှာကျက်စည်းကြပ်ပါဘူးEdmond နှင့် Gallistel, 1974); မဟုတ်ဘဲသူတို့မျှသာပုံမှန်အများဆုံးနှုန်းထားများမှာတုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်ရန်လိုအပ်သောဆွ၏ပမာဏ (ဆုလာဘ်) (တိုးမြှင့်Gallistel နှင့် Karras, 1984) ။ ဤရွေ့ကား pharmacological တွေ့ရှိချက်အပေါင်ပစ္စည်းသမျှလိုငွေပြမှုကိုသူတို့ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းအကြံပြု, neuroleptic မူးယစ်ဆေးဝါးများဦးနှောက်ဆွနှင့် psychomotor လှုံ့ဆော်ဆုလာဘ်၏ထိရောက်မှုကိုတနျဘိုးလြော့စေ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pharmacological လေ့လာမှုများနှင့်အတူအပြိုင်တှငျကြှနျုပျတို့အစောပိုင်းကချဉ်းကပ်ကျော်နှစ်ခုအားသာချက်များနှင့်အတူခန္ဓာဗေဒမြေပုံလေ့လာမှုများစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့ (က moveable လျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပညာရှိ 1976) ကြှနျုပျတို့တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်အတွင်းအများအပြားဆွက်ဘ်ဆိုက်များကိုစမ်းသပ်နိုင်အောင်။ ဆွအကြိုးရှိရာ loci အထက်တွင်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထိရောက်မှုဆွက်ဘ်ဆိုက်များ: တစ်ဦးချင်းစီတိရိစ္ဆာန်ခုနှစ်တွင်, ထို့နောက်ကျနော်တို့ခန္ဓာဗေဒထိန်းချုပ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ 1 / 8 မီလီမီတာ၏လျှပ်ကူးပစ္စည်းလှုပ်ရှားမှုများမကြာခဏဆွတစ်ဦးကဖွရှိရာ site ကို, ဒါမှမဟုတ်အပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဟုတ်ခဲ့ရှိရာ site တစ်ခုကနေတစ်ခုလျှပ်ကူးပစ္စည်းအစွန်အဖျားယူလုံလောက်သောခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအသီးအသီးတိရိစ္ဆာန်အတွက်ဒေါင်လိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းထိုးဖောက်မှုအတွင်းအကျိုးကို circuitry ၏ dorsal-ventral နယ်နိမိတ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအချက်မှာကျနော်တို့ (အသစ်တစ်ခု histochemical နည်းလမ်း၏အားသာချက်ကိုယူBloom နဲ့ Battenberg, 1976) ကလျှပ်ကူးပစ္စည်းလမ်းကြောင်းပြသသောတူညီ histological ပစ္စည်းအတွက် catecholamines စနစ်များ၏နယ်နိမိတ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့။ ယခင်လေ့လာမှုများအသီးအသီးတိရိစ္ဆာန်အတွက်တစ်ခုတည်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းဆိုဒ်များပေါ်နှင့် catecholamines စနစ်များ၏တည်နေရာများကိုဖေါ်ပြခြင်း nissl-စွန်း histological ကဏ္ဍများနှင့်လိုင်းရေးဆွဲတို့အကြားနှိုင်းယှဉ်အပေါ်မှီခိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြေပုံလေ့လာမှုများ (ဆွ၏ထိရောက်သောဇုန်၏နယ်နိမိတ် noradrenergic ဆဲလ်အုပ်စုများသို့မဟုတ်ဖိုင်ဘာအထုပ်များ၏နယ်နိမိတ်ကိုက်ညီတဲ့မပြုခဲ့ကြောင်းပြသCorbett နှင့်ပညာရှိ, 1979) နှင့်ယင်း ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine ဆဲလ်အုပ်စုများနှင့် substantia nigra ပိုဒျ compacta အများ၏နယ်နိမိတ်ကိုက်ညီတဲ့ခဲ့ဘူး (Corbett နှင့်ပညာရှိ, 1980) နှင့်ပိုဒျ lateralis (ပညာရှိ 1981) ။ နောက်ဆက်တွဲအလုပ်ကြိုးဆွဟာသူတို့ရဲ့အနိမ့်ခုံ input ကိုအမျှင် (မြှင့်လုပ်ဆောင်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်အစား High-တံခါးခုံ catecholamines စနစ်များကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုထမြောက်တော်မူခဲ့ပါသည်နေစဉ်Gallistel et al ။, 1981; Bielajew နှင့် Shizgal, 1986; Yeoman et al ။, 1988), အမြေပုံလေ့လာမှုများဆုလာဘ်၏အလွှာအဖြစ် dopamine ထက် norepinephrine စနစ်များအပေါ်အာရုံစိုကျခဲ့ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
“ anhedonia” ဟူသောဝေါဟာရကိုအစားအစာဆု၏လေ့လာမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမ ဦး ဆုံးမိတ်ဆက်ခဲ့သည် (ပညာရှိသောသူ et al ။, 1978) ။ ဤတွင်နောက်တဖန်ကျနော်တို့ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားတိရိစ္ဆာန်များပထမဦးဆုံး dopamine ရန် pimozide ၏အလယ်အလတ်ဆေးများအောက်မှာစမ်းသပ်ပြီးသောအခါ, သူတို့အစာကိုအကျိုးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တုံ့ပြန်အစပျိုးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ် pimozide-pretreated တိရိစ္ဆာန်များအစားအစာ pimozide ၏မရှိခြင်း၌ပေးသောအခါသူတို့ပြုသကဲ့သို့ pimozide ကုသမှုအောက်မှာပထမဆုံးနေ့ (0.5 / ကီလိုဂရမ် MG မှာ) သို့မဟုတ်နီးပါးသလောက် (1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်မှာ) အဖြစ်တာတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ နှစ်ရက် retrained ပြီးတော့ pimozide အောက်မှာတစ်စက္ကန့်အချိန်ကိုစမ်းသပ်တဲ့အခါ, သို့သော်သူတို့သည်နောက်တဖန်သူတို့၏ 45-မိအစည်းအဝေးများ၏အစောပိုင်းတစျပိုငျးကိုအတွက်သာမန်အားဖြင့်တုန့်ပြန်ပေမယ့်အစောပိုင်းကပုံမှန်ထက်တုံ့ပြန်ရပ်တန့်နှင့်ဤဒုတိယ session များအတွက်တုံ့ပြန်၎င်းတို့၏စုစုပေါင်းတစ်ဦးအပေါ်ထက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့ မူးယစ်ဆေး-အခမဲ့တစ်ရက်သို့မဟုတ်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး pimozide-စမ်းသပ်နေ့၌။ retrained နှင့် pimozide အောက်မှာတတိယနှင့်စတုတ္ထအချိန်စမ်းသပ်ပြီးသောအခါ, တိရိစ္ဆာန်များနေဆဲသာမန်အားဖြင့်တုံ့ပြန်အစပျိုးပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းအစောပိုင်းကတုံ့ပြန်မပြောဘဲနေကြ၏။ တစ်ဦးချင်းစီ session ရဲ့ပထမဦးဆုံးမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းတုံ့ပြန်ပုံမှန် pimozide ၏ဆေးများရိုးရှင်းစွာတိရစ္ဆာန် debilitating မဟုတ်ခဲ့အတည်ပြုခဲ့သည်; အဆိုပါ pimozide အခြေအနေအစားအစာမျိုးစုံမြည်းစမ်းအဆိုပါ dopamine စနစ်အားပိတ်ဆို့သောအခါအစားအစာများ၏အကြိုး (တုန့်ပြန်ရပ်တည်) အကျိုးသက်ရောက်မှု devalued ခံခဲ့ရကြောင်းအကြံပြုပြီးနောက်တုံ့ပြန်လျော့နည်းသွားသည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာနှိုင်းယှဉ်တဲ့အဖွဲ့ကိုအလားတူလေ့ကျင့်ခဲ့ပေမယ့်စမ်းသပ်အုပ်စုတွေကို pimozide နဲ့ကုသပေးတဲ့“ စမ်းသပ်” ရက်လေးရက်မှာရိုးရိုးသားသားအကျိုးမရခဲ့ပါဘူး။ pimozide ကုသသည့်တိရိစ္ဆာန်များသည်ပထမနေ့တွင်အစားအစာလုံးလေးများအတွက်ပုံမှန်အကြိမ် ၂၀၀ လီဗာကိုဖိအားပေးသကဲ့သို့နည်းတူအစာဆုရရှိမှုမရှိသည့်တိုင်အောင်ဆုချခြင်းမရှိသောတိရိစ္ဆာန်များသည်ပုံမှန်အကြိမ် ၂၀၀ ကိုလီဗာကိုဖိစေသည်။ စမ်းသပ်ပြီးသောနေ့ရက်များတွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသောအုပ်စုတွင်လီဗာကိုနှိပ်ခြင်းသည်တုံ့ပြန်မှု ၁၀၀၊ ၅၀ နှင့် ၂၅ ခုသို့ကျဆင်းသွားပြီးမျိုးသုဉ်းခြင်းမှခုခံနိုင်စွမ်းလျော့နည်းသွားသည်ကိုပြသသည်။ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုအောက်၌လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည့်တိရိစ္ဆာန်များကိုစိတ်ကျေနပ်မှုအခြေအနေများတွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ပြီးသည့်အခါအဆက်ဆက်စမ်းသပ်မှုများ၌အလားတူပုံစံကိုတွေ့ရသည်။ စမ်းသပ်မှုမတိုင်မီနှင့်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်သောတိရစ္ဆာန်များအတွက်တုံ့ပြန်မှုနှင့်အစာစားခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ pimozide ကုသသို့မဟုတ်အကျိုးမပေးသည့်တိရိစ္ဆာန်များတွင်အလေ့အထ - မောင်းနှင်သည့်လီဗာကိုနှိပ်ခြင်းကဲ့သို့ပင်စိတ်ကျေနပ်မှုအောက်တွင်စားလေ့ရှိသောအစားအစာသည်ထပ်ခါတလဲလဲစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်လျော့နည်းသွားသည်။ မော်ဂန် (1974) မျိုးသုဉ်းရန်ခုခံမှုနှင့်အတူအပြိုင်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုခေါ်ဆောင်သွား, စိတ်ကျေနပ်မှုအောက်မှာတုံ့ပြန်၏တိုးတက်မှုယိုယွင်း "satiation ခုခံ" ဟုချေါ အခြေအနေ (၃) ခုစလုံးတွင် - neuroleptics အောက်တွင်တုံ့ပြန်ခြင်း၊ ဆုလာဘ်မရရှိခြင်းအောက်တွင်တုန့်ပြန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအောက်တွင်တုန့်ပြန်ခြင်း - အပြုအမူအားပုံမှန်အားဖြည့်ခြင်းဖြင့်မထောက်ပံ့ပါကပျက်စီးယိုယွင်းစေသောတုန့်ပြန်မှုအလေ့အထကမောင်းနှင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုတွင်ထပ်တိုးနှိုင်းယှဉ်မှုအဖွဲ့က pimozide နှင့်သက်တမ်းဝက် (half-life) သက်တမ်း ရှိ၍ အဆီအားဖြင့်မျိုသိပ်ထားသည့်ဆေးနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲစမ်းသပ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤအုပ်စုရှိတိရိစ္ဆာန်များသည်၎င်းတို့၏အိမ်၌အိတ်များ၌ pimozide ကိုရရှိခဲ့ကြသော်လည်းပထမ ၃ ရက်တွင်စမ်းသပ်ခြင်းမခံခဲ့ရပါ။ ၄ င်းတို့သည် pimozide ထိုးဆေးလေးပုံတစ်ပုံသာရရှိပြီးမှသာလျှင်အစားအစာအတွက်လီဗာကိုခွင့်ပြုသည်။ ဤတိရိစ္ဆာန်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏စတုတ္ထမြောက် pimozide ကုသမှုအပြီးအစားအစာအတွက်စိတ်အားထက်သန်စွာတုန့်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်စမ်းသပ်ခြင်း ၄ တွင်တုန့်ပြန်ခြင်းသည်ယခင်က pimozide ရှိခြင်းသာမကဘဲရှိခြင်းအပေါ်မူတည်သည် မြည်းစမ်းအစားအစာ အတိတ်ကာလ pimozide အခြေအနေများအောက်တွင်။ pimozide အောက်ရှိအစားအစာအတွေ့အကြုံ၏မှတ်ဉာဏ်နှင့်ပတ်သက်သောတစ်စုံတစ်ရာ - pimozide တစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲ - pimozide စစ်ဆေးမှုများကိုထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောအခါတွေ့ရသောတဖြည်းဖြည်းတုံ့ပြန်မှုရပ်တန့်သွားသည်။ pimozide - ကြိုတင်ကုသထားသောတိရိစ္ဆာန်များသည် pimozide အခြေအနေတွင်၎င်းတို့ကိုမြည်းစမ်းပြီးနောက်အထိအစားအစာအတွက်စိတ်အားထက်သန်စွာတုန့်ပြန်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကကျွန်ုပ်တို့အားအစားအစာသည် pimozide အခြေအနေအောက်တွင်ပျော်စရာမကောင်းဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ pimozide အောက်တွင်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးလျော့နည်းလာပုံရသည့်အရာ၏မရှိမဖြစ်အင်္ဂါရပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်စမ်းသပ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျော့ခ်ျဖူရီယိုစ်၏မှတ်ချက်တွင်အစောပိုင်းကဖမ်းမိခဲ့သည်။
အဆိုပါ anhedonia ၏တရားဝင်ကြေညာချက်ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများ (နှင့်အတူရွယ်တူမှတ်ချက်အထုတ်ဝေမယ့်ဂျာနယ်အတွက်အစားအစာဆုလာဘ်လေ့လာမှုများအပြီးတွင်နှစ်အနည်းငယ်သည်ထင်ရှားပညာရှိ 1982) ။ ကနဦးမှတ်ချက်အ၏သုံးပုံနှစ်ပုံဟာအယူအဆဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သို့မဟုတ် (အဲဒါကိုတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာအဆိုပြုထားဖြစ်စေပညာရှိ 1990) ။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းများအတွက်မူရင်းအယူအဆဆန့်ကျင်မူလတန်းအငြင်းပွားမှုများ (မော်တာသို့မဟုတ်အခြားစွမ်းဆောင်ရည်လိုငွေပြမှုဖို့မေတ္တာရပ်ခံလွတ်မြောက်ပြီနှင့် Zec, 1982; Koob, 1982; Gramling et al ။, 1984; Ahlenius, 1985) ။ ဤရွေ့ကား neuroleptics အစားအစာသို့မဟုတ်ဦးနှောက်ကိုဆွအကျိုးသည်စွမ်းဆောင်ရည်လျော့နည်းသွားပေမယ့်, အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဘို့, neuroleptics မဟုတ်ဘဲတုံ့ပြန်၏စတင်ထက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှောင့်အယှက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြေရှင်းရန်ခဲ့ပါဘူး။ စေသောသောတွေ့ရှိချက်မှအငြင်းပွားမှုများဖြေရှင်းခဲ့သည် သူတို့ကအစကသူတို့တုံ့ပြန်တုံ့ပြန်ရပ်တန့်သည့်အခါ neuroleptic-ကုသတိရိစ္ဆာန်များယခင်ကအေးစက်ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်လှုံ့ဆော်မှုသူတို့ကိုဖော်ထုတ်ကနေပြန်လည်ရုတ်သိမ်းနိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြေရှင်းရန်ပျက်ကွက် (Fouriezos နှင့်ပညာရှိ, 1976; Franklin နှင့် McCoy, 1979) ။ မဟုတ်သလို, ဤငြင်းခုံထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းဆိုတဲ့အချက်ကိုအတူ ပြန်. ခံရနိုင် သူ့ဟာသူ သိသာသုဉ်းခံယူ။ နောက်ဆုံးတော့သူတို့ neuroleptics အစားထိုးစေသောဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြေရှင်းရန်မပြုခဲ့ တိုး လီဗာ-နှိပ်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်အတွက် (Yokel နှင့်ပညာရှိ, 1975; 1976; က de ကျေးများနှင့်ပညာရှိ, 1977).
တစ်မော်တာအယူအဆဆန့်ကျင်အရှိဆုံးအရေးပါအထောက်အထား anhedonia အယူအဆ၏တရားဝင်ကြေညာချက်မတိုင်မီအသေးစိတ်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါစက္ကူ (ပညာရှိသောသူ et al ။, 1978) တုန်းပဲတဖြည်းဖြည်းကိုးကားဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ခဲယခုမူရင်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းတွေ့ရှိချက်အထက်အကျဉ်းချုပ်, ဒါပေမဲ့သူတို့မော်တာယူဆချက် (သို့မဟုတ်နစ်နာမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရဖွယ်၏အခြားယူဆချက်) ၏အများဆုံးကျန်ရှိနေသေးသောအားပေးထောက်ခံသူတွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမှလွတ်မြောက်ရန်ဆက်လက်နေကြ; ဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက်မူရင်းစာရွက်နေဆဲဖတ်နေရကျိုးနပ်သည်။ အဆိုပါဝေဖန်တွေ့ရှိချက် neuroleptics ၏အလယ်အလတ်ဆေးများသာပြင်းထန်စွာအဆိုပါ neuroleptic ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာနေစဉ်တိရိစ္ဆာန်အစာနှင့်အတူအတှေ့အကွုံခဲ့ပြီးနောက်စားစရာဘို့တုံ့ပြန် attenuate ကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်အစားအစာ၏မရှိခြင်းအတွက် neuroleptic နှင့်အတူအတှေ့အကွုံခဲ့ပြီဆိုရင်, စားစရာဘို့တုံ့ပြန်အပေါ်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်မျှသာရှိ၏ အဆိုပါ neuroleptic ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်ရှိအစားအသောက်နှင့်အတူအတှေ့အကွုံခဲ့ပြီးမှသို့သော်သည်, neuroleptic ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတဖြည်းဖြည်းပိုမိုအားကောင်းဖြစ်လာသည်။ အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (တိရစ္ဆာန်၏လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောဆာပတုံ့ပြန်မှုအစားအစာတက်ကောက်နေအဲဒီအခါကဝါး, မြင်ခြင်းနှင့်မျိုချနေကြတယ်ပညာရှိ Colle, 1984; ပညာရှိ Raptis, 1986).
အဆိုပါ anhedonia အယူအဆများ၏ဝေဖန်မှုများအများအပြားသိသိသာသာထက်ပို semantic ခဲ့ကြပြီ။ neuroleptics ၏သက်ရောက်မှုရိုးရှင်းသောမော်တာနစ်နာမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရဖွယ်အဖြစ်ကရှင်းပြသည်မရနိုင်သည်ကိုသဘောတူနေစဉ်, အတော်ကြာစာရေးဆရာများအခြေအနေကိုအခြားအမည်များကိုအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ Katz (1982) "hedonic နှိုးဆော်သံ" ကချေါ; Liebman (1982) "neuroleptothesia" ကချေါ; Rech (1982) ၎င်းကို“ neurolepsis” သို့မဟုတ်“ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပြုမှုအားတုန်ခါမှု” ဟုချေါသည်။ Kornetsky (1985) အဲဒါကို "စိတ်ခွန်အားနိုးမှုနှိုးဆော်ခြင်း" ၏ပြproblemနာတစ်ခုချေါ; နှင့် Koob (1982) အဲဒါကို "ပိုမိုမြင့်မားသောအမိန့်" မော်တာပြproblemနာဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်မေးခွန်းတောင်းပန်ခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသောဝေဖန်မှုများ anhedonia hypothsis, အားဖြည့်အယူအဆနှင့်ဆုလာဘ်အယူအဆကွဲပြားခြားနားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။
အဆိုပါ anhedonia အယူအဆတကယ် dopamine ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျတိုင်းတာဆုလာဘ် function ကိုများအတွက်အရေးကြီးသောသောအယူအဆ၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအယူအဆ၏ကန ဦး ကြေညာချက် neuroleptic pimozide "အစားအစာနှင့်အခြား hedonic လှုံ့ဆော်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအားတုံးမှပုံရသည်" သောဖြစ်ခဲ့သည်ပညာရှိ 1978) ။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ပုဂ္ဂလဒိexperienced္အတွေ့အကြုံ anhedonia အကြောင်းကိုမဟုတ်ဘဲဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျတိုင်းတာဆုလာဘ် function ကိုအကြောင်းအယူအဆမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ပထမဆုံးအကြိမ်အယူအဆကို“ anhedonia hypothesis” ဟုအမှန်တကယ်အမည်တပ်ခဲ့သည်။ပညာရှိ 1982), ကဤသို့ဤသို့ဖော်ပြခဲ့သည်: "neuroleptics ၏သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် (က) ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သောအပြုအမူအတွက်အရေးကြီးသော (ခ) ပုံမှန်အားဖြင့်အားဖြည့်သူများနှင့်ဆက်စပ်သောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ခွန်အားနိုးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ) ပုံမှန်အားဖြင့်အပျော်အပါး၏ပုဂ္ဂလဒိive္အတွေ့အကြုံအားဖြင့်လိုက်ပါသွား။ " အဆိုပါအယူအဆစိတ်ခွန်အားနိုးနှိုးဆော်ခြင်းနှင့်အားဖြည့်နှင့်အတူအတိအလင်း dopamine function ကိုချိတ်ဆက် - ဆုလာဘ်များ၏အခြေခံဂုဏ်သတ္တိများနှစ်ခု - နှင့် "များသောအားဖြင့်" အပြုသဘောအားဖြည့်အတူသောအပျော်အပါး၏ပုဂ္ဂလဒိexperience္အတွေ့အကြုံနှင့်အတူသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုဆိုလို။
dopamine အပျော်အပါးသူ့ဟာသူများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်အံ့သောငှါ၎င်းအကြံပြုချက် (လူနာများ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာများကနေစိတျအပိုငျးသညျ လာ.Healy, 1989) သို့မဟုတ်သာမန်ဘာသာရပ်များ (Hollister et al ။, 1960; Bellmaker နှင့် Wald, 1977) neuroleptic ကုသပေးတော်မူ၏။ neuroleptics ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဆိုပါ dysphoria သူတို့အသက်တာ၏ပုံမှန်အပျော်အပါး attenuate ကြောင်းအကြံပြုချက်နှင့်အတူအတော်လေးကိုက်ညီသည်။ ကအနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့် Euphoria ပီတိစွဲလမ်းဖြစ်ယူဆနေကြသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသူတို့ဖြစ်ပေါ်စေ (- ဒီအမြင်နှင့်ကိုက်ညီကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်တူမူးယစ်ဆေးကြောင့်ခဲ့ကြသည်Bijerot, 1980) - (extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်vanRossum et al ။, 1962; Axelrod, 1970; Carlsson, 1970) ။ အဆိုပါ neuroleptic pimozide, dopamine receptors (နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုတဲ့ neuroleptic) မှာယှဉ်ပြိုင်ရန်လူသားများအတွက် IV စိတ်ကြွဆေးများကသွေးဆောင်အဆိုပါ Euphoria ပီတိကိုလျော့ချဖို့အစီရင်ခံခဲ့ (Jönsson et al ။, 1971; ဂွန် et al ။, 1972).
Euphoria ပီတိ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့ဖို့ neuroleptics များ၏စွမ်းရည်ကို neuroleptic-ကုသ schizophrenic လူနာအတွက်ဆက်လက်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုလက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ၏အခြေခံပေါ်မှာနှင့် neuroleptic-ကုသသာမန်လူသား၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှုအပေါ်ပိုပြီးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ၏အခြေခံပေါ်မှာမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြ ။ အဆိုပါလက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်ဖြစ်သောကြောင့်နာတာရှည် dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ရန်နှင့်သောကြောင့်, မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ, neuroleptic ထိုးနှင့်လှုံ့ဆော်အသုံးပြုမှုကာလအတွင်းမှာကုသမှုနှင့်အတူလိုက်နာမှု၏အစားထိုးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်၏အနက်ကိုဘော်ပြရခက်သည်။ စိတ်ကြွဆေး Euphoria ပီတိအပေါ် pimozide များ၏သက်ရောက်မှုများပိုမိုမကြာသေးမီထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုများ (Brauer နှင့်က de ကျေး, 1996; 1997) လည်းပြဿနာဖြစ်ကြသည်။ ပထမဦးစွာ pimozide ထိုး၏ကိစ္စရပ်များကိုရှိပါတယ်: အစောပိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေး၏မြင့်ထိုး (20 မီလီဂရမ်ခဲ့သည်Jönsson et al ။, 1971; ဂွန် et al ။, 1972), ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ extrapyramidal ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်၏, သော်လည်း, ပိုမကြာသေးမီလေ့လာမှုများ၌မြင့်ထိုး 8 မီလီဂရမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပိုများသောဒုက္ခမူရင်းနှင့်ပိုမိုမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများအကြားစိတ်ကြွဆေးကုသမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ မူရင်းလေ့လာမှုများမှာတော့စိတ်ကြွဆေး၏ 200 မီလီဂရမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးစိတ်ကြွဆေးအသုံးပြုသူများသွေးကြောသွင်းပေးတျောမူ၏ ပိုမကြာသေးမီလေ့လာမှုများအတွက် 10 သို့မဟုတ် 20 မီလီဂရမ်တောင့အတွက်နှုတ်ဖြင့်သာမန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအားပေးပြီးမှခဲ့သည်။ ပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းနာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ခံစားမိနေသည်အဖြစ်၎င်းတို့၏ 20 IV ထိုး MG ပြီးနောက်၎င်းတို့၏ 200 ထံမှတူညီသော Euphoria ပီတိ (တောင့ MG feeling နဲ့ rating လျှင်တစ်ခုမှာတွေးမိရပါမည်တော်ကကျေးဇူး, 2000; Volkow နှင့် Swanson, 2003).
neuroleptics အစားအစာဆုလာဘ်များအပျော်အပါး attenuate သောအယူအဆကိုလည်း (ကြွက်လေ့လာမှုများ၏အခြေခံပေါ်မှာစိန်ခေါ်ထားသည်Treit နှင့် Berridge, 1990; Pecina et al ။, 1997) ။ ဤတွင်စိန်ခေါ်မှုအရသာ-reactivity ကိုစမ်းသပ်, ချိုမြိန်အရသာ၏ hedonic သက်ရောက်မှု၏ putatively စမ်းသပ် (ပေါ်တွင်အခြေခံခဲ့သည်Berridge, 2000) ။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုသည်“ pimozide နှင့်အခြား dopamine ဆန့်ကျင်သူများသည် anhedonia ထုတ်လုပ်သည့်အာရုံခံအပျော်အပါးအတွက်စွမ်းရည်ကိုလျော့နည်းစေသည်” ဟူသောယူဆချက်ကိုတိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။Pecina et al ။, 1997, p ။ 801) ။ သို့သော်ဤစိန်ခေါ်မှုသည်အလေးအနက်သတိပေးချက်များကိုခံရနိုင်သည် -“ အရသာဓာတ်ပြုမှုကို 'အကြိုက်' သို့မဟုတ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုအဖြစ်တိုင်းတာရာတွင်အသုံးပြုသောအခါရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားရန်အရေးကြီးသည်။ 'like' နှင့် 'dislike' စသည့်ဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုသည် မဟုတ် သေချာပေါက်အရသာ reactivity ကိုပုံစံများတစ်ရောင်ပြန်ဟပ်သည်ဟုဆိုလို အပျော်အပါး၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံကို အစားအစာမှထုတ်လုပ် "(Berridge, 2000, p ။ 192 ကိုအလေးထားမူရင်း၌ရှိသကဲ့သို့) နှင့် "ကျနော်တို့အသုံးပြုမှုသည်ဤစကား၏သာမန်အသုံးပြုမှုနှင့်အရေးကြီးသောလမ်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကွောငျ့ကိုးကားအမှတ်အသားများတွင် '' နှစ်သက်" နှင့် 'လို' နေရာချပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့သာမန်အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်ဒီစကားလုံးတွေဟာပုံမှန်အားဖြင့်သတိရှိပျော်မွေ့ခြင်း (သို့) သတိအလိုဆန္ဒများ၏ပုဂ္ဂလဒိexperience္ဌာန်အတွေ့အကြုံကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998, p ။ 313) ။ အရသာဓာတ်ပြုခြင်းစမ်းသပ်မှုသည်အစားအစာ၏ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုင်းတာရန်မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်၊ ဤပါရာဒိုင်းတွင်ပုံမှန်အတိုင်းအရသာဓာတ်ပြုခြင်းကိုအစာကျွေးခြင်းကြွက်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ကင်နှင့် Norgren, 1978) နှင့်အလားတူတုံ့ပြန်မှု anencephalic ကလေးငယ်များတွင်တွေ့မြင်နေကြ (Steiner, 1973) ။ ထိုသို့အရသာ reactivity ကိုစမ်းသပ်မှု (များ၏ကနဦးအနက်ပုံBerridge နှင့်ကင်, 1984) မှန်ကန်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုသည်အစားအစာကိုမျိုချခြင်းသို့မဟုတ်ပယ်ချခြင်း၏ပုံသေလုပ်ဆောင်မှုပုံစံများကိုတိုင်းတာသည် - ပြုံးခြင်းထက်မျိုခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် - hedonic သက်ရောက်မှုကိုသာထင်ဟပ်စေသောကြောင့်၎င်းသည် passive တိရိစ္ဆာန်၏ခံတွင်းထဲသို့ထိုးသွင်းလိုက်သောအရည်၏အပြုသဘောဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အနှုတ်လက္ခဏာကိုထင်ဟပ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စစ်ကူ vs Anhedonia
အဆိုပါ anhedonia အယူအဆဆုလာဘ်အမျိုးမျိုးကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေမယ့် neuroleptic-ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်နျဆာပအပြုအမူများပုံမှန်အဆင့်ဆင့်ဆက်ထိန်းရန်ပျက်ကွက်သောလေ့လာရေးပေါ်တွင်အခြေခံခဲ့သည်။ ဤသည် neuroleptic-သွေးဆောင် anhedonia ၏သက်သေအထောက်အထားများ, ဒါပေမယ့်အပြုသဘောအားကောင်း၏ neuroloptic-သွေးဆောင်ကို attenuation ၏မဟုတ်ဘဲသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားမခံခဲ့ရပါဘူး။ , ဒီဂရီအတွက်ရိုးရိုး (Non-ဆုလာဘ်၏အခြေအနေများအောက်တွင်တုံ့ပြန်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်ကြောင့်တိရိစ္ဆာန်များတွင်တွေ့မြင်အလားတူလျှော့ neuroleptic ကုသမှုတိရိစ္ဆာန်များလက်အောက်တွင်ထပ်ခါတလဲလဲစမ်းသပ်မှုတွေအတွင်းနှင့်ဖြတ်ပြီးနှစ်ဦးစလုံးတုံ့ပြန်အတွက်သာမန်စတင်ပေမယ့်တိုးတက်သောလျှော့ပြပြီး, ဤအလျှော့ပုံစံအတွက် paralleled လျှင်မရပညာရှိသောသူ et al ။, 1978) ။ သူတို့သင်တန်းများအတွက် neuroleptic နှင့်အတူ pretreated ခဲ့ကြသည်လျှင်ထိုမှတပါး, ရင်တော့မှားမယ်ကြွက် (စားစရာဘို့ပုံမှန်အားလီဗာ-စာနယ်ဇင်းမှသင်ယူဖို့မတှေ့ခဲ့ကြပညာရှိ Schwartz, 1981) ။ ထို့ကြောင့်အစားအစာများ၏အလေ့အထ-ဖွဲ့စည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပြင်းထန်စွာ dopamine ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့် attenuated ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်စိန်ခေါ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပေမယ်မဟုတ်ဘဲ (ထို anhedonia အယူအဆတံဆိပ်ကပ်ခံရဖို့ရောက်လာပြီအရာကိုဝေဖန်သူများအားဖြင့်ပုံတူကူးယူခဲ့ကြTombaugh et al ။, 1979; Mason ဆို et al ။, 1980), သူတို့၏အခြေအနေများအောက်တွင် neuroleptics စွမ်းဆောင်ရည်လိုငွေပြမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုစောဒကတက်ကြသူ အထက်နှင့်ကျော်လွန် အားဖြည့်အတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိုငွေပြမှု။ neuroleptics မော်တာ function ကိုပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ထင်နေကြတယ်တချို့အရာရှိသမျှတို့ကို dopamine စနစ်များ, ပိတ်ဆို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေးထားသော, ဤ (အံ့သြစရာသို့မဟုတ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မဟုတ်ခဲ့ပညာရှိ 1985).
Non-ဆုလာဘ်၏ဆိုးကျိုးများနှင့် neuroleptic ကုသမှုအောက်မှာဆုလာဘ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားရှင်းလင်းမည်တူညီနောက်ထပ်နှစ်ခုပိုပြီးသိမ်မွေ့ Paradigm နေဖြင့်ရုပ်ပြနေကြသည်။ ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြည့်ပါရာဒိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းစွာသူတို့လုပ်တိုင်းတုန့်ပြန်များအတွက်ဆုလာဘ်ကိုမျှော်လင့်ဖို့မလေ့ကျင့်သင်ကြားနေကြပါလျှင်တိရိစ္ဆာန်များမျိုးသုဉ်းအခြေအနေများအောက်တွင်ပိုပြီးကိုတုံ့ပြန်မြဲမြံစွာတည်သည်။ သူတို့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအားဖြည့်အောက်မှာလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြပါလျှင်တိရိစ္ဆာန်များမျိုးသုဉ်းမှာပိုကိုတုံ့ပြန်ပါ (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြည့်ဆီးမခံရဖို့အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်လူသိများကြောင်းRobbins, 1971) ။ Ettenberg နှင့်စခန်း food- နှင့်ရေ-လေ့ကျင့်သင်ကြားတုံ့ပြန်မှုအလေ့အထများ၏ neuroleptic စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြည့်ဆီးမခံရဖို့သက်ရောက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကသုံးအခြေအနေများ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်လေ့ကျင့်ပြီးနောက်လေယာဉ်ပြေးလမ်းအလုပ်တခုကို၏မျိုးသုဉ်းအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ Food- သို့မဟုတ်ရေ-ဆုံးရှုံးတိရိစ္ဆာန်များ (စားစရာဘို့ဖြောင့်လမ်းကြားလေယာဉ်ပြေးလမ်းအတွက် 155 စင်တီမီတာကို run ဖို့, တစ်နေ့လျှင်တစ်ဦးစမ်းသပ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်Ettenberg နှင့်စခန်း, 1986b) သို့မဟုတ်ရေ (Ettenberg နှင့်စခန်း, 1986a) ဆုလာဘ်။ အုပ်စုတစ်စုကို“ စဉ်ဆက်မပြတ်” အားဖြည့်အစီအစဉ်တစ်ခုအရလေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်ရက်ပေါင်း ၃၀ လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုစီအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ဒုတိယအုပ်စုသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြည့်ခြင်းဖြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းခံရသည်။ သင်တန်းရက် ၃၀ အနက် ၂၀ တွင်သာသူတို့သတ်မှတ်ထားသောဆုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ရေးကာလတွင်ကျပန်း ၁၀ ရက်အတွင်းတိရိစ္ဆာန်များသည်ရည်မှန်းချက်သေတ္တာသို့ရောက်သောအခါအစားအစာနှင့်ရေကိုမတွေ့ရပါ။ စမ်းသပ်မှုတိုင်းတွင်တတိယအုပ်စုသည်အစားအစာသို့မဟုတ်ရေကိုလက်ခံရရှိသော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့် neuroleptic haloperidol နှင့်ကုသမှုခံယူခဲ့သည်။ သူတို့၏လေ့ကျင့်မှု ၁၀ ​​ကြိမ်တွင်အစားအစာနှင့်ရေကိုရည်မှန်းချက်သေတ္တာထဲတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုနေ့များ၌ haloperidol ဖြင့်ကုသမှုခံယူပြီးနောက် dopamine receptor blockad အောက်တွင်အစားအစာသို့မဟုတ်ရေကိုတွေ့ကြုံခဲ့သည်။ ဤလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်၏အကျိုးဆက်များကိုနောက်ဆက်တွဲနေ့စဉ်“ မျိုးသုဉ်းခြင်း” စမ်းသပ်မှု ၂၂ ခုတွင်အကဲဖြတ်သည်။ အုပ်စုတစ်ခုစီကိုပြေးခွင့်ရသော်လည်းဂိုးစည်းထဲတွင်ဆုမရခဲ့ပါ။ တိရိစ္ဆာန်များအားလုံးတဖြည်းဖြည်းနှေးကွေးသွားပြီးမျိုးသုဉ်းခြင်းစမ်းသပ်မှုများဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်၊ အေးခဲသောအခြေအနေများအောက်တွင်လေ့ကျင့်ထားသောတိရိစ္ဆာန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုမိုမြန်ဆန်စွာယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းထက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြည့်ခြင်းအခြေအနေများအောက်တွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သောတိရစ္ဆာန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်။ "တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း" haloperidol အခြေအနေများအောက်တွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သောတိရိစ္ဆာန်များလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်အားဖြည့်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များထက်ပို။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း haloperidol တိရိစ္ဆာန်များက start-box ကိုအောင်းနေချိန်နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြည့်အောက်မှာလေ့ကျင့်သင်ကြားတိရိစ္ဆာန်များများနှင့်တူညီသောပြေးအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာတိရိစ္ဆာန်များသည်လေ့ကျင့်ခန်းရက်ပေါင်း ၁/၃ တွင် haloperidol ဖြင့်ကုသမှုခံယူပြီးရက်ပေါင်း ၁/၃ တွင်အကျိုးခံစားခွင့်မရှိသဖြင့်မျိုးသုဉ်းခြင်းအတွက်ဖျော်ဖြေကြသည်။ ပထမတွင် haloperidol ကုသသည့်တိရိစ္ဆာန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များထက်ပိုကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယမှာ haloperidol ကိုစမ်းသပ်သည့်နေ့၌သာလေ့ကျင့်ခန်းရက်အချို့တွင်မပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယသိမ်မွေ့ပါရာဒိုင်းနှစ်လီဗာမူးယစ်ဆေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုပါရာဒိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်တိရစ္ဆာန်အဖြစ်ရှည်လျားကြောင်းလီဗာအစားအစာဆုလာဘ်ဖြစ်ထွန်းနှင့်မဟုတ်တော့ဆုခခြံရသောအခါအခြားလီဗာမှပြောင်းရွှေ့ဖို့အဖြစ်နှစ်ခုခရိုနီတဦးအပေါ်တုံ့ပြန်ဆက်လက်လေ့ကျင့်သင်ကြားလျက်ရှိသည်။ သူတို့ကနဦးလီဗာ-စာနယ်ဇင်းနှင့်အတူစားစရာမျှမရရှိခဲ့သည်ခဲ့လျှင်အဖြစ် haloperidol ၏အနိမ့်ဆေးများနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များနားမလည်နိုင်လောက်အောင် (မှားလီဗာမှပြောင်းလဲရန်Colpaert et al ။, 2007) ။ အကြောင်း, မိမိတို့အကနဦးလီဗာ-စာနယ်ဇင်းအပေါ်အစားအသောက်ဝင်ငွေရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းသာမန်ကြွက်နဲ့တူပြုမူသူတို့၏ကနဦးလီဗာ-စာနယ်ဇင်းအပေါ်အစားအသောက်ရရှိခဲ့ကြောင်း haloperidol-ကုသကြွက်များဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယလီဗာပေါ်မှတုံ့ပြန်မှု: အစားအစာ haloperidol အောက်မှာကြိုးမဟုတ်ခဲ့သောသက်သေအထောက်အထားများပါဝင်ပတ်သက်နေသောကြောင့်ဤသည်, တစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုမရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးတုန့်ပြန်၏စတင် haloperidol-သွေးဆောင်မော်တာလိုငွေပြမှုအချို့ကိုပုံစံတစ်ခုရောင်ပြန်ဟပ်မှုမဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ neuroleptics ပုံမှန်အားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ဆုလာဘ်တစ်ခုအကွာအဝေး၏အားဖြည့်ထိရောက်မှုလျော့, သူတို့ကလုပ်ပေးအခြားသမျှသောတိုးရှင်းပါတယ်။
Motivation vs အားဖြည့်
အဆိုပါ anhedonia ယူဆချက်မှလတ်တလောစိန်ခေါ်မှု neuroleptics ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဓိကစိတ်ခွန်အားနိုးလိုငွေပြမှုဆုလာဘ်ကိုရှာဖွေသို့မဟုတ်ဝင်ငွေ drive ကိုသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုများတွင်လိုငွေပြမှုထက်ဆုလာဘ်များလက်ခံရရှိမှု (အတူသောအားဖြည့်ကြောင်းငြင်းခုန်သူကိုသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့ထံမှလာBerridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998; Salamone နှင့်ကော်ရဲရား, 2002; ရော်ဘင်ဆင် et al ။, 2005; Baldo နှင့်ကယ်လီ, 2007) ။ dopamine တွန်းအားပေးနှိုးဆွအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays သောအကြံပြုချက်, တကယ်တော့, anhedonia အယူအဆထက် anhedonia အယူအဆ၏မူရင်းကြေညာချက်ထဲမှာပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်စွာအလေးပေးခဲ့သည် (က) ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သောအပြုအမူအတွက်အရေးကြီးသည်။ပညာရှိ 1982) ။ extracellular dopamine ၏မြင့်မားစွာလေ့လာသင်ယူမှုအပြုအမူအစီအစဉ်များကိုလှုံ့ဆျောပေးနိုငျကွောငျးအခမဲ့ဆုလာဘ်တစ် ဦး ဆာပလုပ်ငန်းတာဝန်အတွက်တုန့်ပြန်မဟုတ်သောတိရိစ္ဆာန်အားပေးသောအခါမြင်သော "priming" အကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဖော်သည် (Howarth နှင့် Deutsch, 1962; Pickens နှင့် Harris က, 1968) ။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုထပ်ခါတလဲလဲသုဉ်းစမ်းသပ်မှုတွေ (ခံကြပြီတိရိစ္ဆာန်များအတွက်တုံ့ပြန်၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် reinstatement အားဖြင့်အကောင်းဆုံးရုပ်ပြဖြစ်ပါတယ်လမ်းပိုင်းနှင့် Gerber, 1973; က de ကျေးများနှင့် Stewart က, 1983) ။ တစ်ဦးကိုကင်း-ရှာကြံတစ်ခုသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူ-ရှာကြံအလေ့အထငွိမျးပြီတိရိစ္ဆာန်များအတွက်တုံ့ပြန်၏ reinstatement များအတွက်အာဏာအရှိဆုံးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမှာပါ (dopamine agonist bromocriptine တစ်ခုခဲတညျးရှာထိုးဖြစ်ပါသည်ပညာရှိသောသူ et al ။, 1990) ။ စိတ်ခွန်အားနိုး arousal များ၏ပါဝင်အားဖြည့်များ၏ကျဉ်း dopamine အယူအဆ (ထံမှဆုလာဘ်၏ dopamine အယူအဆခွဲခြားသောအဓိက feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပညာရှိ 1989; 2004) ။
dopamine စိတ်ခွန်အားနိုး arousal များကိုချဲ့ထွင်သို့မဟုတ်တိုးပွားနိုင်သောလုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားရှိစဉ်အခါ, neuroleptic မူးယစ်ဆေးဝါးများပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုအားဖြင့်တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ထောက်ပံ့သောပုံမှန်စိတ်ခွန်အားနိုး arousal ပိတ်ဆို့မညီအမျှလုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, neuroleptic-ကုသတိရိစ္ဆာန်များပုံမှန်အားဖြင့်တုန့်ပြန်အလေ့အထအစပျိုးလေ့ရှိပါတယ်။ ထိုသို့သောတိရစ္ဆာန်တွေကို start ပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်, လီဗာ-စာနယ်ဇင်းဆက်လက် run, ဒါမှမဟုတ် operating အခန်းများ, ပြေးလမ်း, ဒါမှမဟုတ်အခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးရေးစမ်းသပ်မှုအတွက်မစားကြဘူး။ တစ်ဦး discrete-ရုံးတင်စစ်ဆေးလေယာဉ်ပြေးလမ်းတာဝန်၌ပေးသောအခါ, ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက် haloperidol ပေးထားသည့်အခါရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းပုံမှန်အားဖြင့် run haloperidol-; သူတို့ရဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးလိုငွေပြမှုကိုသာ haloperidol metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်ထားပြီးသောအခါ, နက်ဖြန်နေ့၌ပေါ်လာသည်နှင့်ကုသမှုကျန်ကြွင်းသမျှသောဖြစ်ပါသည် မှတ်ဉာဏ် ကုသမှုရုံးတင်စစ်ဆေး (၏McFarland နှင့် Ettenberg, 1995; 1998) ။ အဆိုပါက start-box ကိုတွေကိုတိရစ္ဆာန် haloperidol ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာအခါနေ့၌အစားအစာသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူမဟုတ်များအတွက်လေယာဉ်ပြေးလမ်းကိုဆင်းပြေးဖြစ်ပေါ်ရန်ပျက်ကွက်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသာဆုလာဘ်ဟာ haloperidol နေ့၌ကဲ့သို့ဖြစ်၏ဘယ်အရာကိုသတိရသည့်အခါနက်ဖြန်နေ့၌။ ဒါကြောင့် haloperidol ကုသမှုရရှိသွားတဲ့သောနေ့၌တိရစ္ဆာန်၏စိတ်ခွန်အားနိုး arousal ကုသမှုအားဖြင့်စိတ်မချရသောမမူ အစားကြောင့်ကုသမှုရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက်နေ့ကတိရစ္ဆာန်စိတ်ပျက်အားလျော့တဲ့ယုတျညံ့ဆုလာဘ်၏မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်ရပါမည်။ ဤသည်အလုပ်များကိုအကွာအဝေးအတွင်းဆာပအပြုအမူအပေါ် neuroleptics ၏သက်ရောက်မှု၏လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အများဆုံးအဓိကသတင်းစကားဖြစ်၏ သင့်လျော်သောဆေးများမှာ neuroleptics ဖို့သင်ယူလှုံ့ဆော်မှုများ၏စွမ်းရည်နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ကြဘူး သွေးထိုးလှုံ့ဆော် ယင်းလှုံ့ဆော်မှုနိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးဖို့စတင်ပြီးနောက်သည်အထိလှုံ့ဆော်အပြုအမူ ထိန်းသိမ်းရန် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် neuroleptic အခြေအနေအကျိုးကို၏အတှေ့အကွုံကြောင်းအပြုအမူ (Fouriezos နှင့်ပညာရှိ, 1976; Fouriezos et al ။, 1978; ပညာရှိသောသူ et al ။, 1978; ပညာရှိ Raptis, 1986; McFarland နှင့် Ettenberg, 1995; 1998).
ဤသည် dopamine phasic dopamine ၏အပွောငျးအလဲဆုလာဘ်-ခန့်မှန်း (နေဖြင့်အစပျိုးဖြစ်ကြောင်းသာကြောင်း, လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူမှလုံးဝဆီလျှော်ကြောင်းပြောမဖြစ်Schultz, 1998), ယခုအချိန်တွင်များအတွက်တစ်ဦးလျှော့အားဖြည့်သမိုင်းနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များ၏ပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်မလိုအပ်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ကောင်းပြီ-လေ့ကျင့်သင်ကြားတိရိစ္ဆာန်များအလေ့အထထဲကကိုတုံ့ပြန်နှင့်ပင် dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အခြေအနေများအောက်တွင်ဒါလုပ်ပါ။ ဦးနှောက် dopamine ဖြစ်တယ်ဆိုရင် လုံးဝ ကုန်ခမ်း, သို့သော်, လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအပေါ်အလွန်အံ့သြဖွယ်သက်ရောက်မှု (ရှိပါတယ်Ungerstedt, 1971; Stricker နှင့် Zigmond, 1974) ။ ဤသည် dopamine synthesize မ Mutant ကြွက်၏လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏ ဒီတိရစ္ဆာန်, စမ်းသပ် dopamine တွေပျက်စီးမှုနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များကဲ့သို့နာကျင်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုများကနှိုးဆွမဟုတ်လျှင်ရွှေ့ဖို့ပျက်ကွက်တစ် dopamine agonist ဒါမှမဟုတ် dopamine-လွတ်လပ်သောလှုံ့ဆော်ဖိန်းဓာတ် (ရော်ဘင်ဆင် et al ။, 2005) ။ ထို့ကြောင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ dopamine ၏အနည်းဆုံးအဆင့်ဆင့်အားလုံးပုံမှန်အပြုအမူများအတွက်လိုအပ်သောပါ၏ dopamine-ကုန်ခမ်း parkinsonian လူနာနဲ့တူ dopamine-ကုန်ခမ်းတိရိစ္ဆာန်များ, (Hornykiewicz, 1979အလေးပေးမဟုတ်လျှင်), (လုံးဝနီးပါးမလှုပ်ရှားနေကြသည်Zigmond နှင့် Stricker, 1989) ။ dopamine တွေပျက်စီးမှုနှင့်ဆက်စပ်မူလတန်းလိုငွေပြမှုများထဲတွင်စိတ်ခွန်အားနိုးအဖြစ်မော်တာအစိတ်အပိုင်းများကို (ရှိသည်သော aphagia နှင့် adipsia ဖြစ်ကြ၏Teitelbaum နှင့် Epstein, 1962; Ungerstedt, 1971; Stricker နှင့် Zigmond, 1974) ။ neuroleptics ၏ဆုလာဘ်-blocking ဆေးများ, သို့သော်, လေးနက် dopamine တွေပျက်စီးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သောလေးနက် catalepsy ထုတ်လုပ်ရန်ပျက်ကွက်။
အခြား Dopamine Terminal နှင့် Fields vs Accumbens
function ကိုဆုချဖို့လေးစားမှုနှင့်အတူပါဆုံးအာရုံစိုက်မှုလက်ခံရရှိကြောင်းအဆိုပါ dopamine terminal ကိုလယ်ပြင်နျူကလိယ accumbens ဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံစူးစိုက်မှုနျူကလိယမှရေးဆွဲခဲ့တာကဒီ၏တွေ့ရှိရပါသည်သော်လည်းမကအခြား catecholamines စနစ်များကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှောင့်အယှက်ဖြစ်သောကြောင့် (ပထမ accumbensရောဘတ် et al ။, 1977) ။ နောက်ထပ်အာရုံကိုနျူကလိယ septi (အစား septum တစ်ခု extension ကိုထက်, striatum တစ် limbic extension ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည် accumbens သောအကြံပြုချက်များအားဖြင့်ထုတ်ပေးခဲ့သည်Nauta et al ။, 1978a,b) နှင့်က limbic သည့်စနစ်အကြားတစ်ဦးကို interface ကြောင်း - သဘောတရားစေ့ဆော်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုချိတ်ဆက် - နှင့် extrapyramidal မော်တာစနစ် (Mogenson et al ။, 1980) ။ နျူကလီးယပ်ဖို့ ventral tegmental ဧရိယာကနေအဓိကအားထုတ်လုပ်တဲ့စနစ် accumbens - - ဆုလာဘ် function ကိုနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်း opiate ဆုလာဘ်၏လေ့လာရေးကိုလည်းက mesolimbic dopamine စနစ်အကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာမော်ဖင်းအကိုက်ကိုသက်ဝင်မှရှာတွေ့ခဲ့သည် (Gysling နှင့်ဝမ်, 1983; မဿဲနှင့်ဂျာမန်, 1984), (ထိုသူတို့ disinhibiting အားဖြင့်ဂျွန်ဆင်နှင့်မြောက်, 1992), dopaminergic အာရုံခံ, ဤဒေသ potentiated ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်အတွက်မော်ဖင်းအကိုက် microinjections (Broekkamp et al ။, 1976), (conditional ရာအရပ်ကိုဦးစားပေးထုတ်လုပ်ဖိလစ်နှင့် LePiane, 1980), နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့ကြသည် (Bozarth နှင့်ပညာရှိ, 1981).
အရှင်ထတွေ့ရှိချက်များမှ dopamine ယူဆချက်တစ်ခုစိန်ခေါ်မှုကြောင့်နျူကလိယ (ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အားလုံးဆာပအပြုအမူနှောင့်အယှက်ပျက်ကွက် accumbensSalamone et al ။, 1997) ။ နျူကလိယကိုတွေ့ရှိရန်ရွေးချယ်ရန်မဖြစ်နိုင်လောက်သည့်ပြandနာအပြင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ နျူကလိယတွေ့ရှိချက်များကိုတွေ့ရှိခြင်းကဒြပ်ပါန်၏လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုမဖယ်ရှားသင့်ဟုယူဆရန်အခြားအကြောင်းပြချက်များရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာကိုကင်းသည် nucleus accumbens သို့သာတိုက်ရိုက်ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်သည် (Carlezon et al ။, 1995; Ikemoto, 2003), ဒါပေမယ့်လည်း - နှင့်ပိုပြီး avidly - ထို medial prefrontal cortex သို့ (Goeders နှင့်စမစ်, 1983; Goeders et al ။, 1986) နှင့် olfactory tubercle (Ikemoto, 2003) ။ သွေးကြောသွင်းကင်းဆုလာဘ်မသာတဲ့: D ၏ microinjections အားဖြင့် attenuated ဖြစ်ပါတယ်1 အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာသို့ရန် (Ranaldi နှင့်ပညာရှိ, 2001) ဒါပေမယ့်လည်းအလားတူထိုးခြင်းအားဖြင့် substantia nigra သို့ (Quinlan et al ။, 2004) ။ နောက်ဆုံးတွင် dorsal striatum အတွက် Post-ရုံးတင်စစ်ဆေး dopamine လွှတ်ပေးရေး (သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏စုစည်းပြီးပိုကောင်းစေပါတယ်အဖြူနှင့်အ Viaud, 1991), နှင့် dorsal striatum အတွက် dopamine ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (ဒီဒေသအတွက်ရေရှည်အလားအလာ (သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တစ်ဆယ်လူလာပုံစံ) ချို့ယွင်းCentonze et al ။, 2001) ။ မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီး၏အလားအလာ (အနှစ်သာရအတွက်အားဖြည့်များ၏ပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါသည်Landauer, 1969) နှင့် dopamine အဆိုပါ dorsal striatum နှင့်အခြားအဆောက်အဦများအမျိုးမျိုး (အတွင်းမှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီး potentiate ပုံအဖြူ, 1989; ပညာရှိ 2004).
ထို့ကြောင့်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးအဘို့, dopamine အယူအဆတစ်ခုနျူကလိယယူဆချက် accumbens လျှော့ချမရသင့်ပါတယ်။ နျူကလိယတာဖြစ်ပါတယ် accumbens ပေမယ့်ဆုလာဘ် function ကိုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည့် dopamine terminal ကိုလယ်ကွင်းများထဲမှ။
dopamine ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ reward အတွက်အကျိုးကျေးဇူးအတွက်သက်သေအထောက်အထားများတဖြည်းဖြည်းစုဆောင်းနေစဉ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ စိတ်အားထက်သန်မှုနှိုးဆွခြင်း” အဖြစ်မူလကထိထိရောက်ရောက်အကျဉ်းချုံးထားသောအခန်းကဏ္roleတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှု၏တိကျသောသဘောသဘာဝကိုကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုတို့တွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ပြmotorနာ (၄) ခုသည်မကြာသေးမီကစာပေတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောမော်တာအယူအဆအပေါ်မူကွဲများအပြင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါ anhedonia အယူအဆဖို့တိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်မှုနှင့်ဆုလာဘ်များ dopamine အယူအဆ (အဖြစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်တစ်ခုမှာအကြံပြုချက်,Salamone et al ။, 1994; 1997; 2005) Neuroleptics ကိုလျှော့ချပေးတာကလှုံ့ဆော်မှုမဟုတ်ဘဲအားဖြည့်ပေးရုံသာမကတိရစ္ဆာန်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုလားမှုပါ။Salamone et al ။, 2003) ။ ဤသည်မှာအကြံပြုချက်မျှသာ semantic ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကွိုးစားအားထုဖို့စိတ်အားထက်သန်သည့် anhedonia အယူအဆ (များ၏ကနဦးသုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြေညာချက်တွင်ပထမဦးဆုံးဒြပ်စင်ကျနော်တို့လှုံ့ဆျောမှုသို့မဟုတ် drive ကိုအားဖြင့်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကို၏အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်ပညာရှိ 1982).
dopaminergic အာရုံခံအတွက် dopamine ချို့တဲ့ (သို့သော် noradrenergic အာရုံခံထဲမှာဆက်ပြီး) Mutant ကြွက်များ၏လေ့လာရေးဦးနှောက် dopamine အစားအစာ-ဆုခခြံဆာပသင်ယူမှုအဘို့လုံးဝမလိုအပ်ကြောင်းပြသပါ။ သူတို့ကိုနှိုးဆှမှကဖိန်းဓာတ်ပေးထားပါလျှင်, dopamine-လစ်လပ်ကြွက် (အစားအစာဆုလာဘ်တစ်ခုကို T-ဝင်္များ၏မှန်ကန်သောလက်မောင်းကိုရှေးခယျြဖို့သင်ယူနိုင်ပါတယ်ရော်ဘင်ဆင် et al ။, 2005) ။ ဤသည်ကဖိန်းဓာတ်နဲ့ကုသကြသည်မဟုတ်ကြောင်း dopamine-လစ်လပ်ကြွက်ချို့တဲ့ရသောအမှုသည်အသောစိတ်ခွန်အားနိုး arousal အတွက် dopamine implicates နှင့် dopamine ဖို့မရှိမဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းကိုညွှန်ပြ - အစားအစာများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှု - ပုံမှန်အားဖြင့်ရန်ကိုအလွန်အထောက်အကူပြုသော်လည်း။ ဒါဟာမှတ်သားဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်, ကြောင်းဖိန်း - ထို Mutant ကြွက် dopamine မပါဘဲမှာအားလုံးပြုမူကြလျှင်လိုအပ်သည် - စ (အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိရိစ္ဆာန်များအတွက် dopamine အာရုံခံ၏ neurotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောနို့တိုက်ကျွေးရေးတုံ့ပြန်မှု restoresStricker et al ။, 1977) ။ အဆိုပါဖိန်းဓာတ်ဆိုးကျိုးများ၏ယန္တရားအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ပေမယ့်ဖိန်းဓာတ်ဟာ nigro-striatal ၏ dopaminergic အမျှင်များနှင့် meso-limbic dopamine စနစ်များ၏ပုံမှန်အာရုံခံပစ်မှတ်ဖြစ်ကြောင်းအတူတူပင်အလတ်စား spiny striatal အာရုံခံအကျိုးသက်ရောက်သည်မဟုတ်။ ဒါဟာ (intracellular သိသိ amp တိုးပွါးကြောင်း phosphodiesterase inhibitor ကဲ့သို့ရှိပြုမူGreengard, 1976) နှင့်တစ်ဦး adenosine receptor ရန်အဖြစ် (Snyder et al ။, 1981) ။ ထို့အပွငျကဖိန်းဓာတ်ပိတ်ဆို့သော adenosine receptors ပုံမှန်အားဖြင့် (dopamine receptors နှင့်အတူ heteromers ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်ထို receptors မှာ dopamine ၏သက်ရောက်မှုဖို့ intracellular တုံ့ပြန်မှုကိုထိခိုက်Ferre et al ။, 1997; Schiffmann et al ။, 2007) ။ အဆိုပါ striatum အတွက် dopamine နဲ့ adenosine receptors ၏ရှုပ်ထွေးသော interaction ကဖိန်းဓာတ်အဆငျ့ဆငျ့အချက်ပြashared သို့မဟုတ်ထပ် intracellular အတွက် dopamine များအတွက်အစားအားဖြင့် dopamine-လစ်လပ်ကြွက်များတွင်လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်သောဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက်။
Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို (ventral tegmental dopamine အာရုံခံအစားအစာဆုလာဘ်သူ့ဟာသူဘဲ, အတွေ့အကြုံ၏ရလဒ်အဖြစ်, အစားအစာဆုလာဘ်များခန့်မှန်းဖို့မသာဆုလာဘ် function ကိုတုံ့ပြန်အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရကြောင်းပြသကြRomo နှင့် Schultz, 1990; Ljungberg et al ။, 1992) ။ တိရစ္ဆာန်အနေနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုအစားအစာဆုလာဘ်ခန့်မှန်းကြောင်းသိရှိလာသည့်အတိုင်းကနဦးအစာကိုတင်ဆက်သူ့ဟာသူအစပျိုးခဲ့ dopaminergic အာရုံကြောပစ်ခတ်ရန်၏ 200 မီလီစက္ကန့ပေါကျကှဲက precedes သောအစားအစာ-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်နှိုးဆွရန်, အစား, နှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်လာသည်။ အစားအစာ-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်နှိုးဆွဟာစမ်းသပ်မှုတွေသာအစိတ်အပိုင်းအပေါ်အစားအသောက်ခန့်မှန်းလျှင်, ထို dopaminergic အာရုံခံအဆိုပါခန့်မှန်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အစားအစာမှတုန့်ပြန်တဲ့အငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိ, ပြင်းစွာတိုက်; အဆိုပါခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အားနည်းအစားအစာတင်ဆက်မှုဖို့တုန့်ပြန်နိုင်ရန်တုံ့ပြန်မှုအားကောင်း, ခန့်မှန်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဟာပိုမိုအားကောင်း။
အဆိုပါ dopaminergic အာရုံခံအစားအစာသူ့ဟာသူတုံ့ပြန်နှင့်အစားအစာခန့်မှန်းဖို့အစားတုံ့ပြန်ရန်ငြိမ်းဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားအသောက်၏အရသာကိုမျှသာအကျိုးကိုခန့်မှန်း (သူ့ဟာသူမဟုတ်ပါဘူးရှိမရှိ၏ပြဿနာပေါ်ပေါက်ပညာရှိ 2002) ။ တချို့ကအရသာ (မွေးဖွားထံမှခြွင်းချက်မရှိစစ်ကူဖြစ်ပေါ်လာSteiner, 1974), ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေကိုသူတို့ Post-စားသုံးမိအကျိုးဆက်များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အရသာ၏အသင်းအဖွဲ့မှတဆင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုကိုရရှိ (Sclafani နှင့် Ackroff, 1994).
Dopamine နှင့်“ in Stamping in ။ ”
“ အားဖြည့်” ဟူသောအယူအဆသည်အသင်းအဖွဲ့များကို“ ထိုးနှက်ခြင်း” ဟူသောအယူအဆဖြစ်သည်။Thorndike, 1898) ။ အသင်းတစ်အခြေအနေများနှင့်တစ်ဦးခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုများအကြားရှိမရှိ (Pavlov, 1928), တစ်နှိုးဆွပြီးတုန့်ပြန် (Thorndike, 1911), သို့မဟုတ်တစ်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်တစ်ဦးရလဒ်ကို (Skinner, 1937), အားဖြည့်အတွေ့အကြုံကိုမှတဆင့်အနေနဲ့အသင်းအဖွဲ့များ၏အားကောင်းရန်ရည်ညွှန်းသည်။ ဒါကြောင့်ကိုကြည့်အခြားသောနည်းလမ်းအားဖြည့်အသင်းများအတွက်မှတ်ဉာဏ်သဲလွန်စများစုစည်းပြီးပိုကောင်းစေပါတယ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်ပါတယ်Landauer, 1969) ။ (Post-ရုံးတင်စစ်ဆေး dopaminergic activation ၏လေ့လာရေး dopamine မကြာသေးမီကအတွေ့အကြုံရှိဖြစ်ရပ်များနှင့်အသင်းအဖွဲ့များအဘို့မှတ်ဉာဏ်သဲလွန်စမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်အားဖြည့်ဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းအကြံပြု, ထိုသို့ dopamine terminal ကိုလယ်ကွင်းအမျိုးမျိုးအတွက်ဒါမအဖြူနှင့်အ Milner, 1992) ။ သက်သေအထောက်အထားများအများအပြားလိုင်းများ (Reynolds က et al ။, 2001; ပညာရှိ 2004; Hyman et al ။, 2006; Wickens et al ။, 2007) ယခု dopamine အားဖြည့်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍသောအမြင်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏ဆယ်လူလာမော်ဒယ်များအတွက် dopamine များအတွက် modulatory အခန်းကဏ္ဍ ဆက်စပ်. အ။
အဆိုပါ anhedonia အယူအဆ၏မူကွဲသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်အားဖြည့်များ၏ dopamine ယူဆချက်ပေါ်လာဖို့ဆက်လက်နေစဉ်, မူလကဖော်ပြထားသကဲ့သို့အယူအဆနေဆဲစိတ်ခွန်အားနိုးသီအိုရီ dopamine များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အတိုင်းအတာဖမ်းယူ။ dopamine ၏ phasic မြင့်တက်ဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုများအကြားအသင်းအဖွဲ့အတွက်တုန့်ပြန်မှုအလေ့အထများနှင့်တံဆိပ်ခေါင်းများတည်စေသောအားဖြည့်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအနေဖြင့်ဦးနှောက် dopamine ၏သာမန်အဆင့်ဆင့်, သာမန်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အရေးကြီးလှသည်။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္အပျော်အပါး phasic dopamine မြင့်တက်စေသောအကြိုးဖြစ်ရပ်များ၏ပုံမှန် Correlate ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်စိတ်ဖိစီးဖြစ်ရပ်များလည်း dopamine မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်; အရှင်အပျော်အပါး dopamine ဓာတ်လှေကားတစ်ဦးလိုအပ်သော Correlate မဟုတ်ပါဘူးသို့မဟုတ်ပင် (သူ့ဟာသူ reinforcementKelleher နှင့် Morse က, 1968).
အဆိုပါ Basal ganglia နှင့် thalamus အကြားခန္ဓာဗေဒဆက်သွယ်မှု၏ Ahlenius အက်စ်တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစား antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများလှုပ်ရှားမှု၏စတင်တားစီးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 1985;8: 173-174 ။
Axelrod ဂျေဖက်တမင်းဆေးပြား: ဇီဝြဖစ်, ဇီဝကမ္မသဘောနှင့် catecholamines သိုလှောင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှု။ ခုနှစ်တွင်: ကော်စတာ, E, Garattini S က, အယ်ဒီတာများ။ မူးယစ်နှင့်ဆက်စပ်ဒြပ်ပေါင်းများမှာ။ နယူးယောက်: Raven စာနယ်ဇင်း; 1970 ။ စစ။ 207-216 ။
Baldo BA, ကယ်လီ AE ။ သိသာစွာကွဲပြားစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များ၏ discrete neurochemical ကုဒ်: နို့တိုက်ကျွေးရေး၏နျူကလိယ accumbens ထိန်းချုပ်မှုကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ Psychopharmacol ။ 2007;191: 439-459 ။ [PubMed]
Bellmaker RH အ, Normal Br အတွက် Wald ဃ Haloperidol ။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1977;131: 222-223 ။ [PubMed]
Berridge KC ။ တိရိစ္ဆာန်များနှင့်မွေးကင်းစအတွက် hedonic သက်ရောက်မှုတိုင်းတာခြင်း: အကျိုးသက်ရောက်စေအရသာ reactivity ကိုပုံစံများ microstructure ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2000;24: 173-198 ။ [PubMed]
Berridge KC, ကင် HJ ။ Isohedonic အရသာအာခေါင်တစ် Two-ရှုထောင်ယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။ အစာစားချင်စိတ်။ 1984;5: 221-231 ။ [PubMed]
Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ hedonic သက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်သင်ယူမှု, ဒါမှမဟုတ်မက်လုံးပေး salience: ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ? ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 1998;28: 309-369 ။ [PubMed]
Bielajew ကို C, အ medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေး၏ Self-stimulation အတွက်ဆင်းအမျှင် implicating Shizgal P. အထောက်အထား။ ဂျေ neuroscience ။ 1986;6: 919-929 ။ [PubMed]
အပျော်အပါးမှ Bijerot N. စွဲ: စွဲနေတဲ့ဇီဝဗေဒနှင့်လူမှုရေး-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီ။ ခုနှစ်တွင်: Lettieri DJ သမား, Sayersand M က, Pearson HW, အယ်ဒီတာများ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်သီအိုရီ: Selected ခေတ်ပြိုင်ပတ်သ က်. ။ Rockville, MD: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, 1980 ။ စစ။ 246-255 ။
Bloom FE, Battenberg elf ။ glyoxylic အက်ဆစ်-သွေးဆောင်ချောင်းအားဖြင့်ဗဟို catecholamines ပါဝင်သောအာရုံခံခြင်းနှင့် axon ၏သရုပ်ပြများအတွက်တစ်ဦးက, လျင်မြန်ရိုးရှင်းပြီးအထိခိုက်မခံတဲ့နည်းလမ်းကို။ II ကို။ နည်းစနစ်များ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်။ ဂျေ Histochem ။ Cytochem ။ 1976;24: 561-571 ။ [PubMed]
Bozarth MA, ပညာရှိ RA ။ ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာသို့မော်ဖင်းအကိုက် Intracranial Self-အုပ်ချုပ်မှု။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1981;28: 551-555 ။ [PubMed]
တစ်ဦးတည်းဃ-စိတ်ကြွဆေးနှင့်ပုံမှန်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် pimozide pretreatment ပြီးနောက် Brauer LH, က de ကျေးအိပ်ချ် Subject တုံ့ပြန်မှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1996;39: 26-32 ။ [PubMed]
Brauer LH, က de ကျေးအိပ်ချ်မြင့်မားထိုး pimozide ပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် Euphoria ပီတိပိတ်ဆို့မထားဘူး။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1997;56: 265-272 ။ [PubMed]
Broekkamp CLE, ဗန် Bogaard JH, Heijnen HJ, Rops RH အ, Cool AR, ဗန် Rossum JM Den ။ intracerebral microinjections အားဖြင့် Self-stimulation အပြုအမူအပေါ်မော်ဖင်းအကိုက်သက်ရောက်မှုဟန့်တားခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်၏ခွဲခြာ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 1976;36: 443-446 ။ [PubMed]
Carlezon WA, Jr က Devine DP, ပညာရှိ RA ။ နျူကလိယ accumbens အတွက် nomifensine ၏အလေ့အထ-ဖွဲ့စည်းလုပ်ရပ်တွေကို။ Psychopharmacol ။ 1995;122: 194-197 ။ [PubMed]
Carlsson အေဒီဖြစ်ပျက်မှု, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်အတွင်း catecholamines ၏ဇီဝကမ္မအခန်းကဏ္ဍ။ Pharmacol ။ ဗျာ 1959;11: 90-493 ။ [PubMed]
Carlsson အေဖက်တမင်းဆေးပြားနှင့်ဦးနှောက် catecholamines ။ ခုနှစ်တွင်: ကော်စတာ, E, Garattini S က, အယ်ဒီတာများ။ မူးယစ်နှင့်ဆက်စပ်ဒြပ်ပေါင်းများမှာ။ နယူးယောက်: Raven စာနယ်ဇင်း; 1970 ။ စစ။ 289-300 ။
Carlsson တစ်ဦးက, Lindqvist M က, Magnusson T က, Waldeck ခဦးနှောက်ထဲမှာ 3-hydroxytyramine ၏ရှေ့မှောက်တွင်တွင်။ သိပ္ပံ။ 1958;127: 471 ။ [PubMed]
Carlsson တစ်ဦးက, Falck B ကို, ဦးနှောက် monoamines ၏ Hillarp N. ဆယ်လူလာမူပြောင်းခြင်း။ Acta Physiol ။ Scand ။ 1962;56 ပျော့ပျောင်း: 1-28 ။ [PubMed]
Centonze: D, Picconi B, Gubellini P ကို, ဘား, G, အ dorsal striatum အတွက် Synaptic plasticity ၏ Calabresi P. Dopaminergic ထိန်းချုပ်မှု။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2001;13: 1071-1077 ။ [PubMed]
Colpaert F, Koek W, Kleven M, Besnard J. in မူးယစ်ဆေးဝါးခွဲခြားဆက်ဆံမှုပါရာဒိုင်းတွင် "win-shift" ၏ antipsychotics ဆေးထိုးခြင်း။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 2007;322: 288-298 ။ [PubMed]
Corbett: D, ပညာရှိ RA ။ တစ်ဦး moveable လျှပ်ကူးပစ္စည်းမြေပုံလေ့လာမှု: အ pontine tegmentum နှင့် caudal midbrain ၏ကွှ noradrenergic ဖိုင်ဘာစနစ်တွေစပ်လျဉ်း Intracranial Self-stimulation ။ ဦးနှောက် Res ။ 1979;177: 423-436 ။ [PubMed]
Corbett: D, ပညာရှိ RA ။ တစ်ဦး moveable လျှပ်ကူးပစ္စည်းမြေပုံလေ့လာမှု: အ midbrain ၏ကွှ dopaminergic စနစ်များနှင့်စပ်လျဉ်း Intracranial Self-stimulation ။ ဦးနှောက် Res ။ 1980;185: 1-15 ။ [PubMed]
Corbett: D, Skelton RW, ပညာရှိ RA ။ noradrenergic ဆော့ဝဲအစုအဝေးကိုတွေ့ရှိရပါသည် locus coeruleus ၏ဒေသမှ Self-stimulation နှောင့်အယှက်ရန်ပျက်ကွက် Dorsal ။ ဦးနှောက် Res ။ 1977;133: 37-44 ။ [PubMed]
Crow အဘိဓါန်တီဂျေ။ လျှပ်စစ် Self-stimulation များအတွက်ကြွက် mesencephalon ၏မြေပုံကို။ ဦးနှောက် Res ။ 1972;36: 265-273 ။ [PubMed]
Crow အဘိဓါန်တီဂျေ, လှံ PJ, Arbuthnott GW ။ အဆိုပါ locus coeruleus ၏ဒေသတွင်း၌လျှပ်နှင့်အတူ Intracranial Self-stimulation ။ ဦးနှောက် Res ။ 1972;36: 275-287 ။ [PubMed]
က de ကျေး H ကို, ဘိန်းဖြူ-အားဖြည့်သည့်ကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်၏ Stewart ကဂျေမူးယစ်ဆေး reinstatement ။ Psychopharmacol ။ 1983;79: 29-31 ။ [PubMed]
ကျေး H ကို, ပညာရှိ RA က de ။ အဆိုပါ dopamine အဲဒီ receptor blocker pimozide နှင့်အတူကြွက်များတွင်ကင်းအားဖြည့်များ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, ဒါပေမယ့်မ noradrenergic blockers phentolamine သို့မဟုတ် phenoxybenzamine အတူ။ နိုင်သလား။ ဂျေ Psychol ။ 1977;31: 195-203 ။ [PubMed]
Edmond DE, Gallistel CR ။ ကြွက်များတွင်ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်၏ parametric ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: III ကို။ အကျိုးကို summation function ကိုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည် variable တွေကိုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဂျေ comp ။ Physiol ။ Psychol ။ 1974;87: 876-883 ။ [PubMed]
Ettenberg တစ်ဦးက, စခန်း CH ။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း haloperidol နဲ့ကုသရေအားဖြည့်ကြွက်များတွင်တစ်ဦးကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြည့်ဆီးမခံရဖို့အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1986a;25: 1231-1235 ။ [PubMed]
Ettenberg တစ်ဦးက, စခန်း CH ။ Haloperidol ကြွက်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြည့်ဆီးမခံရဖို့အကျိုးသက်ရောက်မှု induces: အစားအစာဆုလာဘ်အတွက် dopamine ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1986b;25: 813-821 ။ [PubMed]
Ferre S က, Fredholm BB, Morelli M က, Popoli P ကို, အ Basal ganglia အတွက် Integrated ယန္တရားအဖြစ် Fuxe K. Adenosine-dopamine အဲဒီ receptor-receptor interaction က။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1997;20: 482-487 ။ [PubMed]
Fibiger HC ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အားဖြည့်ယန္တရားများ: အ catecholamines သီအိုရီ၏အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ Annu ။ ဗျာ Pharmacol ။ Toxicol ။ 1978;18: 37-56 ။ [PubMed]
Fibiger HC, Carter က DA, Phillips က AG က။ neuroleptics သို့မဟုတ် 6-hydroxydopamine ပြီးနောက် intracranial Self-stimulation လျော့နည်းသွား: မော်တာလိုငွေပြမှုအားဖြင့်ထက်လျှော့ချဆုလာဘ်တို့ကကြားဝင်ဖြန်ဖြေဘို့သက်သေသာဓက။ Psychopharmacol ။ 1976;47: 21-27 ။ [PubMed]
Fouriezos G. အသက်သာစေသောဆေးကိုပေး-သွေးဆောင်ခုန်? ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 1985;8: 174-175 ။
Fouriezos, G, ပညာရှိ RA ။ intracranial Self-stimulation ၏ Pimozide-သွေးဆောင်သုဉ်း: တုံ့ပြန်မှုပုံစံများမော်တာသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်လိုငွေပြမှုထွက်အုပျစိုး။ ဦးနှောက် Res ။ 1976;103: 377-380 ။ [PubMed]
Fouriezos, G, Hansson P ကို, ပညာရှိ RA ။ ကြွက်များတွင်ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်၏ Neuroleptic-သွေးဆောင်ကို attenuation ။ ဂျေ comp ။ Physiol ။ Psychol ။ 1978;92: 661-671 ။ [PubMed]
Franklin KBJ ။ catecholamines နဲ့ Self-stimulation: ဆုလာဘ်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်သက်ရောက်မှု dissociated ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1978;9: 813-820 ။ [PubMed]
Franklin KBJ, McCoy SN ။ ကြွက်များတွင် Pimozide-သွေးဆောင်သုဉ်း: မော်တာလိုငွေပြမှုထွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတုံ့ပြန်၏လှုံ့ဆော်မှုကိုထိန်းချုပ်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1979;11: 71-75 ။ [PubMed]
WJ, Zec RF ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ neuroleptic သက်ရောက်မှုတစ်ခုအနက်အဖြစ်သက်သာခြင်းအထဲကအာဏာရများအတွက်လိုအပ်ချက်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 1982;5: 57-59 ။
Gallistel CR, Karras ဃ Pimozide နှင့်စိတ်ကြွဆေးအကျိုးကို summation function ကိုအပေါ်သက်ရောက်မှုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1984;20: 73-77 ။ [PubMed]
Gallistel CR, Shizgal P ကို, Self-stimulation များအတွက်အလွှာ၏ Yeoman ဂျေတစ်ဦးကပုံတူ။ Psychol ။ ဗျာ 1981;88: 228-273 ။ [PubMed]
Gallistel CR, Boytim M က, Gomita Y ကို, Klebanoff အယ်လ် pimozide ဦးနှောက်ဆွ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့သလား Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1982;17: 769-781 ။ [PubMed]
ဂျာမန်, DC, Bowden DM ။ တစ်ဦးအယူအဆ: intracranial Self-stimulation များအတွက်အာရုံကြောအလွှာအဖြစ် catecholamines စနစ်များကို။ ဦးနှောက် Res ။ 1974;73: 381-419 ။ [PubMed]
Goeders NE, Smith က je ။ ကိုကင်းအားဖြည့်အတွက် cortical dopaminergic ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ သိပ္ပံ။ 1983;221: 773-775 ။ [PubMed]
Goeders NE, Dworkin SI, Smith က je ။ အဆိုပါ medial prefrontal cortex သို့ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး Neuropharmacological အကဲဖြတ်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1986;24: 1429-1440 ။ [PubMed]
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ dopamine စနစ်ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အရက်နှင့်လှုံ့ဆော်တဏှာကိုနားလည်ဘို့က၎င်း၏ဂယက်၏လုပ်သူများ / phasic မော်ဒယ်။ စွဲလမ်း။ 2000;95: S119-S128 ။ [PubMed]
Gramling SE, မုဆိုး SC, Collins က KR ။ တစ်ဦး anhedonia ပါရာဒိုင်းအတွက် sucrose ဖြေရှင်းချက်ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ nondeprived ကြွက်အပေါ် pimozide အချို့သည်ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1984;21: 617-624 ။ [PubMed]
neurotransmitters ၏ postsynaptic လုပ်ရပ်များအတွက်သိသိဘေ့နှင့် phosphorylated အမြှေးပါးပရိုတိန်းအဘို့အ Greengard P. ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားအခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 1976;260: 101-108 ။ [PubMed]
ကင် HJ, Norgren R. အဆိုပါအရသာ reactivity ကိုစမ်းသပ်။ II ကို။ နာတာရှည် thalamic နှင့်နာတာရှည် decerebrate ကြွက်များတွင် gustatory လှုံ့ဆော်မှုမှ Mimetic တုံ့ပြန်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1978;143: 281-297 ။ [PubMed]
ဂွန် LM, Änggardအီး, Jönsson LE ။ စိတ်ကြွဆေး-blocking မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ။ Psychiatric ။ Neurol ။ Neurochirurg ။ 1972;75: 225-226 ။ [PubMed]
K ကိုဝမ် RY Gysling ။ ကြွက်များတွင် A10 dopamine အာရုံခံ၏မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် activation ။ ဦးနှောက် Res ။ 1983;277: 119-127 ။ [PubMed]
Healy ဃ Neuroleptics နှင့်အဘိဥာဏ်လျစ်လျူ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ ဂျေတော်ဝင် Soc ။ Med ။ 1989;82: 615-619 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Heath RG ။ လူကို Intracranial Self-stimulation ။ သိပ္ပံ။ 1963;140: 394-396 ။ [PubMed]
Heath RG ။ လူကိုပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု။ ဂျေအာရုံကြော။ Ment ။ disorders ။ 1972;154: 3-18 ။ [PubMed]
Hollister LE, Eikenberry ၎င်းကို, အဆုတ်တီဘီနှင့်အတူ nonpsychotic လူနာ Raffel အက်စ် Chlorprom-azine ။ နံနက်။ ဗျာ Resp ။ dis ။ 1960;82: 562-566 ။ [PubMed]
ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အခြားအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများရှိ Hornykiewicz O. Brain dopamine ။ ခုနှစ်တွင်: Horn AS, Korf J ကို, Westerink BHC, အယ်ဒီတာများ။ Dopamine ၏ Neurobiology ။ နယူးယောက်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1979 ။ စစ။ 633-653 ။
Howarth CI, Deutsch JA ။ မောင်းနှင်မှုယိုယွင်းခြင်း - ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းအတွက်သင်ယူသောအလေ့အထများကိုလျင်မြန်စွာ“ ပျောက်ကွယ်စေခြင်း” အကြောင်းရင်း။ သိပ္ပံ။ 1962;137: 35-36 ။ [PubMed]
Hyman SE, Malenka RC, Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏အာရုံကြောယန္တရားများ: ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Annu ။ ဗျာ neuroscience ။ 2006;29: 565-598 ။ [PubMed]
intracranial Self-အုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာမှုများ: ကင်းဆုလာဘ်အတွက် olfactory tubercle ၏ Ikemoto အက်စ်ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 2003;23: 9305-9511 ။ [PubMed]
ဂျွန်ဆင် SW, မြောက်အမေရိက RA ။ Opioids ဒေသခံ interneurons ၏ hyperpolarization အားဖြင့် dopamine အာရုံခံ excite ။ ဂျေ neuroscience ။ 1992;12: 483-488 ။ [PubMed]
Jönsson L ကို, Änggard E ကိုလူအတွက်သွေးကြောသွင်းစိတ်ကြွဆေး Euphoria ပီတိဂွန် L ကိုအယ်လ်ပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ Clin ။ Pharmacol ။ Ther ။ 1971;12: 889-896 ။ [PubMed]
Katz ld ။ Hedonic arousal, မှတ်ဉာဏ်နှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 1982;5: 60 ။
Kelleher RT ကို, Morse က WH ။ noxious လှုံ့ဆော်မှုကို အသုံးပြု. အချိန်ဇယား။3။ တုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်လျှပ်စစ်လှုပ်ခြင်းနှင့်အတူထိန်းသိမ်းထားတုံ့ပြန်။ ဂျေ Exp ။ စအို။ ပြုမူနေ။ 1968;11: 819-838 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koob gf ။ အဆိုပါ dopamine anhedonia အယူအဆ: တစ် pharmacological phrenology ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 1982;5: 63-64 ။
Kornetsky C. Neuroleptic မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် operant chamber ၌ပျော်မွေ့နိုင်သော်လည်း schizophrenic ၏ခေါင်းတွင်လှုံ့ဆော်မှုနှိုးဆွမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 1985;8: 176-177 ။
Landauer TK ။ စုစည်းပြီးအဖြစ်အားဖြည့်။ Psychol ။ ဗျာ 1969;76: 82-96 ။ [PubMed]
Lepore M က, Franklin KBJ ။ ဦးနှောက်ဆွနှင့်အတူမူးယစ်ဆေး kinetics မော်ဒယ်: dopamine ရန် Self-stimulation တိုးမြှင့်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1992;41: 489-496 ။ [PubMed]
Liebman ဂျေ neuroleptics ကိုနားလည်ခြင်း: "anhedonia" မှ "neuroleptothesia" အထိ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 1982;5: 64-65 ။
Ljungberg T က, Apicella P ကို, အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများလေ့လာသင်ယူနေစဉ်အတွင်းမျောက် dopamine အာရုံခံ၏ Schultz ဒဗလျူတုံ့ပြန်ချက်။ ဂျေ Neurophysiol ။ 1992;67: 145-163 ။ [PubMed]
Mason ဆို ST, Beninger RJ, Fibiger HC, Phillips က AG က။ တုံ့ပြန်၏ Pimozide-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှု: အစားအစာဆုလာဘ်တစ်ခုပိတ်ပင်တားဆီးမှုဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထား။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1980;12: 917-923 ။ [PubMed]
Matthews က RT ကို, ဂျာမန်, DC ။ မော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့်ကြွက် ventral tegmental ဧရိယာ dopaminergic အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဘို့အ Electrophysiological သက်သေအထောက်အထား။ neuroscience ။ 1984;11: 617-626 ။ [PubMed]
McFarland K ကို Ettenberg အေ Haloperidol differential သွေးကြောသွင်းဘိန်းဖြူတစ်ခုလမ်းကြား running ကြွက်များတွင်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များသာသက်ရောက်သည်။ Psychopharmacol ။ 1995;122: 346-350 ။ [PubMed]
McFarland K ကို Ettenberg အေ Haloperidol အစားအစာ-ရှာကြံအပြုအမူတစ်ခု operating လေယာဉ်ပြေးလမ်းမော်ဒယ်အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များမထိခိုက်ပါဘူး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 1998;112: 630-635 ။ [PubMed]
Mogenson GJ, ဂျုံးစ် DL, Ettenberg တစ်ဦးက, Yim CY ။ အဆိုပါ limbic စနစ်နှင့်ယင်းမော်တာစနစ်ကအကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ interface ကို: လှုံ့ဆျောမှုကနေအရေးယူရန်။ prog ။ Neurobiol ။ 1980;14: 69-97 ။ [PubMed]
မော်ဂန် MJ ။ satiation မှခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ တိရိစ္ဆာန်ပြုမူနေ။ 1974;22: 449-466 ။
Nauta WJH, Ettenberg တစ်ဦးက, Domesick vB ။ limbic နှင့် striatal circuitry ၏လမ်းဆုံလမ်းခွ: hypothalamo-nigral ဆက်သွယ်မှု။ ခုနှစ်တွင်: Livingston Ke, Hornykiewicz အိုအယ်ဒီတာများ။ Limbic ယန္တရားများ။ နယူးယောက်: Plenum စာနယ်ဇင်း; 1978a ။ စစ။ 75-93 ။
Nauta WJH, Smith ကမိသားစုဆရာဝန်, Faull RLM, Domesick vB ။ Efferent ဆက်သွယ်မှုနှင့်နျူကလိယ၏ nigral afferents ကြွက်များတွင် septi accumbens ။ neuroscience ။ 1978b;3: 385-401 ။ [PubMed]
ကြားရှိဂျေပျော်ရွှင်မှုဦးနှောက်ထဲမှာစင်တာ။ သိပ္ပံ။ နံနက်။ 1956;195: 105-116 ။
ကြားရှိဂျေကိုယ်ပိုင်ဆွစမ်းသပ်ချက်များနှင့်ထူးခြားဆုလာဘ်စနစ်များကို။ ခုနှစ်တွင်: ဂျက် H ကို, Proctor က ld, Knighton RS, Noshay WC, Costello RT ကို, အယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါဦးနှောက်၏ Reticular ဖွဲ့စည်းခြင်း။ ဘော်စတွန်: Little က, ဘရောင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများ; 1959 ။ စစ။ 671-687 ။
ကြားရှိ J ကို, Milner pm တွင်။ အပြုသဘောအားကောင်း septal ဧရိယာနှင့်ကြွက်ဦးနှောက်၏အခြားဒေသလျှပ်စစ်ဆွနေဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဂျေ comp ။ Physiol ။ Psychol ။ 1954;47: 419-427 ။ [PubMed]
ကြားရှိ ME, ကြွက် diencephalon ၏ကြားရှိဂျေချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှားခြင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 1963;120: 259-295 ။ [PubMed]
ကြားရှိ J ကို, ကြားရှိ ME ။ drives, ဆုလာဘ်များနှင့်ဦးနှောက်။ ခုနှစ်တွင်: Newcombe TM, အယ်ဒီတာ။ စိတ်ပညာအတွက်နယူးလမ်းညွှန်များ။ နယူးယောက်: Holt, Rinehart နဲ့ Wiston; 1965 ။ စစ။ 327-410 ။
ကြားရှိ J ကို, Travis RP ။ Self-stimulation အပေါ် chlorpromazine, meprobamate, pentobarbital နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 1960;128: 397-404 ။ [PubMed]
Pavlov အိုင်ပီ။ conditional reflex အပေါ်ပို့ချချက်။ နယူးယောက်: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထုတ်ဝေ; 1928 ။
Pecina S က, Berridge KC, က Parker LA က။ အရသာ reactivity ကိုအားဖြင့် sensorimotor ဖိနှိပ်မှုကနေ anhedonia ၏ခွဲခြာ: Pimozide အာခေါင်ပြောင်းလဲရန်မထားဘူး။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1997;58: 801-811 ။ [PubMed]
Phillips က AG က, Fibiger HC ။ Dopaminergic နှင့်အပြုသဘောအားကောင်း၏ noradrenergic အလွှာ: d- နှင့်ဌ-စိတ်ကြွဆေး၏ differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ သိပ္ပံ။ 1973;179: 575-577 ။ [PubMed]
Phillips က AG က, LePiane အပြည်ပြည်သွား။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာသို့မော်ဖင်းအကိုက် microinjection ၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1980;12: 965-968 ။ [PubMed]
Pickens R ကို, Harris က WC ။ ကြွက်များက D-စိတ်ကြွဆေး၏ self-အုပ်ချုပ်မှု။ Psychopharmacologia ။ 1968;12: 158-163 ။ [PubMed]
substantia nigra dopamine D1 receptors ၏ Quinlan MG, Sharf R ကို, Lee က Dy, ပညာရှိ RA, Ranaldi R. ပိတ်ဆို့ကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းကင်းဆုလာဘ်လျော့နည်းစေသည်။ Psychopharmacol ။ 2004;175: 53-59 ။ [PubMed]
Ranaldi R ကို, ပညာရှိ RA ။ : D ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း1 အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine receptors ကင်းဆုလာဘ်လျော့ကျ: dendritically ဖြန့်ချိ dopamine ဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ ဂျေ neuroscience ။ 2001;21: 5841-5846 ။ [PubMed]
Rech R. Neurolepsis: စိတ်ခံစားမှု reactivity ကို၏ anhedonia သို့မဟုတ်တုံး။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 1982;5: 72-73 ။
Reynolds ကဖြစ်မှု, Hyland BI, Wickens JR ။ ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှု၏တစ်ဦးကဆယ်လူလာယန္တရား။ သဘာဝ။ 2001;413: 67-70 ။ [PubMed]
ME Risner, ဂျုံးစ် BE ။ စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် noradrenergic နှင့် dopaminergic ဖြစ်စဉ်များ၏အခန်းက္ပ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1976;5: 477-482 ။ [PubMed]
ME Risner, ဂျုံးစ် BE ။ ခွေးတို့ကကိုကင်းနှင့်အ norcocaine ၏သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်မှု။ Psychopharmacol ။ 1980;71: 83-89 ။ [PubMed]
Robbins ဃတစိတ်တပိုင်းအားဖြည့်: 1960 ကတည်းက alleyway စာပေတစ်ဦးရွေးချယ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Psychol ။ နွားလား။ 1971;76: 415-431 ။
ရောဘတ် DCS, Corcoran ME, Fibiger HC ။ ကိုကင်း၏သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် catecholaminergic စနစ်များတက်၏အခန်းကဏ္ဍကိုတွင်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1977;6: 615-620 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင်က S, Sandstrom သည် SM, Denenberg VH, Palmiter RD ။ ချို့တဲ့နှင့် / သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ, dopamine အကြိုက်ထိန်းညှိခြင်းရှိမရှိကွဲပြားခြားနားသွား။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2005;119: 5-15 ။ [PubMed]
SK ကိုလှိမ့်ပုံ။ Intracranial Self-stimulation မနိုး: ပတ်ဝန်းကျင်ဦးနှောက် catecholamines ကြိုးကိုင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ သိပ္ပံ။ 1970;168: 1370-1372 ။ [PubMed]
Romo R ကို, ထိုမျောက် midbrain ၏ Schultz ဒဗလျူ Dopamine အာရုံခံ: Self-အစပျိုးလက်မောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းမှာတက်ကြွစွာတို့ထိရန်တုံ့ပြန်မှုများပေါ်ဖြစ်ပေါ်။ ဂျေ Neurophysiol ။ 1990;63: 592-606 ။ [PubMed]
Salamone JD, အားဖြည့်များ၏ကော်ရဲရားအမ်လှုံ့ဆျောမှုအမြင်များ: နျူကလိယ၏အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ဘို့သက်ရောက်မှုတွေ dopamine accumbens ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 2002;137: 3-25 ။ [PubMed]
Salamone JD, ဝမ်းကွဲက MS, Bucher အက်စ် Anhedonia သို့မဟုတ် anergia? haloperidol နှင့်နျူကလိယ၏ဆိုးကျိုးများတစ်ဦးသည် T-ဝင်္ကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်နျဆာပတုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်ရေးအပေါ် dopamine လျော့ကျ accumbens ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 1994;65: 221-229 ။ [PubMed]
Salamone JD, ဝမ်းကွဲက MS, Snyder BJ ။ နျူကလိယ၏အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine accumbens: အ anhedonia အယူအဆနှင့်အတူပင်ကိုယ်မူလနှင့်အယူအဆရေးရာပြဿနာများကို။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 1997;21: 341-359 ။ [PubMed]
Salamone JD ကော်ရဲရားက M, Mingote S က, Weber နဲ့ SM ။ သဘာဝကလှုံ့ဆျောမှု, Psychiatry နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏လေ့လာမှုများအဘို့အဂယက်: နျူကလိယ dopamine နှင့်အစားအစာ-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏စည်းမျဉ်း accumbens ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 2003;305: 1-8 ။ [PubMed]
Salamone JD ကော်ရဲရားက M, Mingote သည် SM, Weber နဲ့ SM ။ အကျိုးကိုယူဆချက်ထက်ကျော်လွန်: နျူကလိယ၏အခြားရွေးချယ်စရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine accumbens ။ Curr ။ Opin ။ Pharmacol ။ 2005;5: 34-41 ။ [PubMed]
Schiffmann SN, Fisone, G, Moresco R ကို, Cunha RA, Ferréအက်စ် Adenosine တစ်ဦးက2A receptors နှင့် Basal ganglia ဇီဝြဖစ်စဉ်။ prog ။ Neurobiol ။ 2007;83(5): 277-292 ။ EPub 2007 ဇွန်လ 26 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Schultz dopamine အာရုံခံ၏ဒဗလျူခန့်မှန်းဆုလာဘ် signal ကို။ ဂျေ Neurophysiol ။ 1998;80: 1-27 ။ [PubMed]
Sclafani တစ်ဦးက, Ackroff K. ဂလူးကို့-နှင့်ကြွက်များတွင် fructose-အေးစက်အရသာဦးစားပေး: postingestive အေးစက်နှိုင်းယှဉ်မြည်းစမ်း။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 1994;56: 399-405 ။ [PubMed]
sem-Jacobsen CW ။ psychotic လူနာ depth-electrographic လေ့လာတွေ့ရှိချက်: စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောတဲ့စနစ်။ Acta Psychiatric ။ Scand ။ 1959;34 Suppl.:412-416 ။ [PubMed]
Skinner BF ။ conditional တုံ့ပြန်မှုနှစ်မျိုး: Konorski နှင့် Miller ကတစ်ပြန်ကြားချက်။ ဂျေဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychol ။ 1937;16: 272-279 ။
Snyder SH, Katims JJ, Annau Z ကို, Brun RF, Daly JW ။ Adenosine receptors နှင့် methylxanthines ၏အမူအကျင့်လုပ်ရပ်တွေကို။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 1981;78: 3260-3264 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Stein အယ်လ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် Self-stimulation အပေါ် imipramine, chlorpromazine, reserpine နှင့်စိတ်ကြွဆေးများအပြန်အလှန်: စိတ်ကျရောဂါ၏ဖြစ်နိုင်သော neurophysiological အခြေခံ။ ခုနှစ်တွင်: Wortis J ကို, အယ်ဒီတာ။ ဇီဝဗေဒ Psychiaty တွင်လတ်တလောတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ။ နယူးယောက်: Plenum; 1962 ။ စစ။ 288-308 ။
ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်၏ Stein အယ်လ်ဓာတုဗေဒ။ ခုနှစ်တွင်: Efron DH, အယ်ဒီတာ။ NeuroPsychophar-macology ၏အမေရိကန်ကောလိပ်၏တရားစွဲဆိုမှု။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်အစိုးရပုံနှိပ်ရုံး; 1968 ။ စစ။ 105-123 ။
Steiner je ။ အဆိုပါ gustofacial တုံ့ပြန်မှု: ပုံမှန်နှင့် anencephalic မွေးကင်းစမွေးကင်းစအပေါ်လေ့လာ။ Symp ။ ခံတွင်း Sensation ။ အမြင်။ 1973;4: 254-278 ။ [PubMed]
Steiner je ။ ဆွမြည်းစမ်းအနံ့မှပင်, ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသည်လူ့မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေ။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1974;237: 229-233 ။ [PubMed]
လမ်းပိုင်း R ကို, Gerber GJ ။ မျောက်များအတွက်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအပြုအမူ၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် reinstatement ။ နိုင်သလား။ ဂျေ Psychol ။ 1973;27: 168-177 ။ [PubMed]
Stricker EM, Zigmond MJ ။ ကြွက်များတွင် 6-hydroxydopamine ၏ intraventricular ထိုး၏ homeostasis အပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ ဂျေ comp ။ Physiol ။ Psychol ။ 1974;86: 973-994 ။ [PubMed]
Stricker EM, Zimmerman ကို MB, Friedman MI, Zigmond MJ ။ ကဖိန်းဓာတ် 2-hydroxydopamine-ကုသကြွက်များတွင် 6-deoxy-D-ဂလူးကို့စတုံ့ပြန်နို့တိုက်ကျွေးမှု restores ။ သဘာဝ။ 1977;267: 174-175 ။ [PubMed]
Teitelbaum P ကို, Epstein AN ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic syndrome ရောဂါ: နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အရက်သောက်၏ပြန်လည်နာလန်ထူ။ Psychol ။ ဗျာ 1962;69: 74-90 ။ [PubMed]
Thorndike EL ။ တိရိစ္ဆာန်ထောက်လှမ်းရေး: တိရစ္ဆာန်များအတွက် The Associated ဖြစ်စဉ်များတစ်ခုစမ်းသပ်လေ့လာမှု။ Psychol ။ Monogr ။ 1898;8: 1-109 ။
Thorndike EL ။ တိရိစ္ဆာန်ထောက်လှမ်းရေး။ နယူးယောက်: အေ; 1911 ။
Tombaugh TN, Tombaugh J ကို, alimentary အပြုအမူတွေအပေါ် dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ Anisman အိပ်ချ်အကျိုးသက်ရောက်မှု: နေအိမ်လှောင်အိမ်အစားအစာစားသုံးမှု, မဂ္ဂဇင်းသင်တန်း, Operations ဝယ်ယူနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်။ Psychopharmacol ။ 1979;66: 219-225 ။ [PubMed]
Treit: D, Berridge KC ။ အရသာ-reactivity ကိုပါရာဒိုင်းအတွက် benzodiazepine, serotonin, နှင့် dopamine အေးဂျင့်များ၏တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1990;37: 451-456 ။ [PubMed]
Ungerstedt U. Adipsia နှင့် nigro-striatal dopamine စနစ်၏ 6-hydroxydopamine သွေးဆောင်ယိုယွင်းပြီးနောက် aphagia ။ Acta Physiol ။ Scand ။ 1971;367 Suppl.:95-122 ။ [PubMed]
vanRossum JM, ဗန် der Schoot JB JB, Hurkmans ဂျေအေ။ ဦးနှောက်ထဲမှာကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရား။ Experientia ။ 1962;18: 229-230 ။ [PubMed]
Volkow ND, Swanson JM ။ ADHD ရဲ့ကုသမှု methylphenidate ၏လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုကိုထိခိုက်ကြောင်း Variables ကို။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;160: 1909-1918 ။ [PubMed]
White NM ။ ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်အားဖြည့်: ခြားနားချက်ကဘာလဲ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 1989;13: 181-186 ။ [PubMed]
White ကမိုင်, Milner pm တွင်။ စစ်ကူ၏ psychobiology ။ Annu ။ ဗျာ Psychol ။ 1992;43: 443-471 ။ [PubMed]
White ကမိုင်, Viaud အမ်ဒေသခံစံနှုန်းပြုထားသော intracaudate dopamine: D2 Post-လေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းအဲဒီ receptor activation ကြွက်များတွင်အမြင်အာရုံသို့မဟုတ် olfactory conditional စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုအဘို့မှတ်ဉာဏ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ပြုမူနေ။ အာရုံကြော Biol ။ 1991;55: 255-269 ။ [PubMed]
Wickens JR, Horvitz JC, ကော်စတာ RM, လုပ်ရပ်များနှင့်အလေ့အထများအတွက် Killcross အက်စ် Dopaminergic ယန္တရားများ။ ဂျေ neuroscience ။ 2007;27: 8181-8183 ။ [PubMed]
norepinephrine ၏ဗဟိုအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပညာရှိတဲ့ CD ကို, ဦးနှောက် Self-stimulation ၏ Stein အယ်လ်နည်းပြ။ သိပ္ပံ။ 1969;163: 299-301 ။ [PubMed]
ပညာရှိတဲ့ CD ကို, Stein အယ်လ်ဖက်တမင်းဆေးပြား: အ medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေးထဲကနေ norepinephrine ၏တိုးပွားလွှတ်ပေးရေးသဖြင့်အပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။ ခုနှစ်တွင်: ကော်စတာ, E, Garattini S က, အယ်ဒီတာများ။ မူးယစ်နှင့်ဆက်စပ်ဒြပ်ပေါင်းများမှာ။ နယူးယောက်: Raven စာနယ်ဇင်း; 1970 ။ စစ။ 463-485 ။
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ ကြွက်များတွင်နာတာရှည်ဦးနှောက်ဆွဘို့အ Moveable လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 1976;16: 105-106 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ ဆုလာဘ်၏ catecholamines သီအိုရီ: အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ ဦးနှောက် Res ။ 1978;152: 215-247 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Intracranial Self-stimulation: အ substantia nigra ၏ dopaminergic ဆဲလ်များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နယ်နိမိတ်ဆန့်ကျင်မြေပုံ။ ဦးနှောက် Res ။ 1981;213: 190-194 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Neuroleptics နှင့် operating အပြုအမူ: အ anhedonia ယူဆချက်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 1982;5: 39-87 ။
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ အဆိုပါ anhedonia အယူအဆ: မာကု III ကို။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 1985;8: 178-186 ။
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ ဦးနှောက်နှင့်ဆုလာဘ်။ Liebmanand JM, Cooper က SJ, အယ်ဒီတာများ in: ။ ဆုကြေး၏ Neuropharmacological အခြေခံ။ အောက်စဖို့ဒ: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1989 ။ စစ။ 377-424 ။
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ အပျော်အပါးဆန့်ကျင်မူးယစ်ဆေးဝါး။ Curr ။ မာတိကာ။ 1990;22: 20 ။
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry: unsensed မက်လုံးပေးကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002;36: 229-240 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 2004;5: 483-494 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Colle LM ။ Pimozide အခမဲ့နို့တိုက်ကျွေးရေး attenuates: အကောင်းဆုံးရမှတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးလိုငွေပြမှုဖော်ပြသည်။ Psychopharmacol ။ 1984;84: 446-451 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA အခမဲ့နို့တိုက်ကျွေးရေး၏ Initiative နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအမံအပေါ် naloxone နှင့် pimozide ၏ Raptis အယ်လ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1986;368: 62-68 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Schwartz HV ။ Pimozide ကြွက်များတွင်စားစရာဘို့နှိပ်လီဗာ၏ဝယ်ယူ attenuates ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1981;15: 655-656 ။ [PubMed]
ပညာရှိ RA, Spindler J ကို, deWit H ကို, Gerber GJ ။ ကြွက်များတွင် Neuroleptic- သွေးဆောင် "anhedonia": pimozide လုပ်ကွက်အစားအစာများ၏အရည်အသွေးဆုချ။ သိပ္ပံ။ 1978;201: 262-264 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Murray တစ်ဦးက, Bozarth MA ။ Bromocriptine Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကင်း-လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်နှိပ်ဘိန်းဖြူ-လေ့ကျင့်သင်ကြားလီဗာ၏ bromocriptine-reinstatement ။ Psychopharmacol ။ 1990;100: 355-360 ။ [PubMed]
Yeoman JS, Maidment NT, Bunney BS ။ A9 နှင့် A10 dopamine ဆဲလ် medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေး axon ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဂုဏ်သတ္တိများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1988;450: 86-93 ။ [PubMed]
Yokel RA, ပညာရှိ RA ။ ဆုလာဘ်တစ်ခု dopamine သီအိုရီအဘို့အဂယက်: တိုးမြှင့်လီဗာကြွက်များတွင် pimozide ပြီးနောက်စိတ်ကြွဆေးအဘို့အနှိပ်။ သိပ္ပံ။ 1975;187: 547-549 ။ [PubMed]
Yokel RA, ပညာရှိ RA ။ ကြွက်များတွင်အလယ်ပိုင်း dopamine ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်သွေးကြောသွင်းစိတ်ကြွဆေးအားဖြည့်များ၏ attenuation ။ Psychopharmacol ။ 1976;48: 311-318 ။ [PubMed]
Zigmond MJ, Stricker EM ။ လက်တွေ့နှင့်အခြေခံဂယက်: ရွေးချယ် neurotoxins သုံးပြီး Parkinson ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ။ int ။ ဗျာ Neurobiol ။ 1989;31: 1-79 ။ [PubMed]